ယောက်ခမ ၏ ပလှေ – My Blog
ယောက်ခမ ၏ ပလှေ
ဦးဘတုတျ ဇနီး ဒျေါဒျေါလှ မှာ ငယျစဉျက သူတို့ နယျက မယျဘှဲ့ရထားခဲ့ဘူးသူ ဖွဈပွီး၊ အသကျကလေး ရလာသျောလညျး ၊ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျး အမွဲလုပျနသေဖွငျ့ သမီး မြားကပငျအားကြ လောကျအောငျ၊ နုနယျနပေသေေးသညျ၊ ဦးဘတုတျက ဒျေါဒျေါလှကို သူတို့ မွို့နူငျ့ မိုငျ ၂၀ ခနျ့ဝေးသျော တိုငျးမွို့ကွီး ကို သှားလညျဖို့ ပွောနေ၏၊သူတို့ သားမကျ ကိုတငျထှတျ လညျး ရောကျနသေညျ၊ ဆိုတော့ သှားခငျြတဲ့ နရော လိုကျပို့ပေးခိုငျးလို့ ရမညျပေါ့တနေ့ သူတို့ ရှိရာသို့ ကိုတငျထှတျ တယောကျ ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျ ရောကျလာခဲ့သညျ၊ သူတို့ မွို့လေးမှ မိုငျ အနညျးငယျဝေးသော ရှာတရှာတှငျ အလုပျကိစ
်စ အတှကျသှားစရာရှိရာ၊ မှ ယောက်ခမ ကွီးတှေ ရောကျနသေညျ ကွားလို့ လှညျ့ဝငျလာခွငျးဖွဈလသေညျ။ ထိုဒသေ နယျပယျတှငျး တှငျ ကားလမျးမြားမှာ အင်ျဂလိပျခတျေကထဲ က ဖေါကျခဲ့သော လမျးမြားကို မပွုမပွငျပဲ သုံးနကွေတုနျးမို့ ကားအသုံးနညျးပွီး မျောတျောဆိုငျကယျ မြားသာ အသုံးမြားလသေညျ၊ ကိုတငျထှတျကလညျး ထုံစံအတိုငျးသူ့ ဘီအကျအေ မျောတျောဆိုငျကယျကွီး တဖုနျးဖုနျးနူငျ့ရောကျလာခွငျး ဖွဈလသေညျ၊ ဦးဘတုတျက တော့ သူ့ဘာသာ လှတျလှတျ လပျလပျ နခေဲ့ခွငျတာနဲ့ အတျောပဲ
ဆိုပွီး ဒျေါဒျေါလှကို ကိုတငျထှတျနူငျ့ တရကျနူဈရကျလိုကျ သှားလညျဖို့ ပွောသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှက လညျး ပငျြးတာနဲ့ လိုကျမယျဆိုပွီး အထုတျတထုတျစာပဲ ဆှဲ ပွီး လိုကျဖို့ပွငျသညျ၊ ကိုတငျထှတျက သူသှားမညျ့ရှာမှာ အောကျကို ထပျဆငျးရပွီးမှ မွို့ ကို အထကျပွနျတကျရမှာမို့ ယောကျက်ခမ ကွီး ပငျပနျးမှာစိုး၍ အပွနျဝငျချေါပါမညျ ဟုပွောသေး၏၊ သို့သျော သူသှားမညျ့ ရှာ၊ ယခု ဒျေါဒျေါလှ တို့ နရော နူငျ့ သူတို့ ရုံးခှဲ ရှိသညျ့ မွို့ တို့ မှာ ဖိုခနောကျဆိုငျ တညျရှိသဖွငျ့ တကူးတက ပွနျဝငျချေါနရေမညျ၊ ထိုရှာ ပတျဝနျးကငျြ ရူခငျးမြားက လညျး လှသညျဟု နာမညျကြျောသဖွငျ့ ဒျေါဒျေါလှက အခုထညျးက လိုကျမညျ ဆိုတော့ လညျး မငွငျးဆနျရဲ၊ သူ့ ဆိုငျကယျ အနောကျမှာ တငျ၍ချေါ လာခဲ့ရတော့ သညျ။ သူတို့ မွို့ကလေး အပွငျရောကျတာနဲ့ လမျးက ကွမျးပွီ၊ ဒါတောငျ ကိုတငျ ထှတျက သူ့ဆိုငျကယျကို ကြှမျးကငျြ စှာဖွငျ့ ခြိုငျ့တှေ ခှကျတှကေို ရှောငျမောငျးသညျ၊ ယောကျခမကွီးကလညျး ဆိုငျကယျပျေါက ပွုတျကမြှာ စိုးလို့ သူ့ခါး ကို တငျးတငျးဖကျလာသညျ၊ ယောကျခမကွီးရဲ့ ဖောငျးတငျးနတေဲ့ နိူ့ကွီးတှကေ ကိုတငျထှတျ ကြောပွငျ ကိုလာဖိမိနေ သညျ၊ ကိုတငျထှတျတယောကျ စိတျ ကို မနညျးထိနျး၊ ဆိုငျကယျလကျကိုငျကို မနညျးထိနျးမောငျး နရေသညျ၊ သူ့ယောကျခမကွီး မှာ ငယျငယျက မယျ ရခဲ့ဘူးသူဖွဈမှနျးလညျးသိသညျ၊ သူ ဝငျးပ ပ နူငျ့ ရကတဲက သူ့သူငယျခငျြးတှကေ နောကျကွ သညျ၊ ကိုယျ့မိနျးမ ကွီးလာရငျ ဘယျလိုပုံဖွဈ မလဲ ဆိုတာ အမေ ကိုကွညျ့ရမညျလို့ ဆိုကွသညျ၊ ဒျေါဒျေါ လှမှာ ဝငျးပပ နူငျ့ အပွိုငျ လှဆဲ ဖွဈသညျ၊ ဝငျးပပ ကလညျး တျောတျော တောငျ့သော အမြိုးသမီးဖွဈသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှကတော့ အသကျကလေး ရလာ တော့ ၀၀ဖိုငျ့ဖိုငျ့ လေးလို့
ထငျရပမေဲ့ ကွီးတာတှကေ သူ့နရောနူငျ့သူ အခြိုးကြ နသေေးသညျ၊ ဝငျးပပ နောကျ အနူဈ ၂၀ အဲလိုပုံမြိုးဖွဈလာ လို့ကတော့ အောငျမလေး ဖိုးကြိုငျးတုတျပေါ့၊ ဝငျးပပ ၊ မြိုးမမနူငျ့ ဒျေါဒျေါလှ တို့ သုံးယောကျ ယှဉျသှားလိုကျရငျ၊ ယောကျကြား သနာတှေ ဘယျသူ့ ရှေးရမညျ မသိ ဦးနှောကျစား သှားနိူငျသညျ။ သူ့ဟာနူငျ့သူ သရညျကစြရာ ကွီးတှကေိုး၊ ကိုတငျထှတျမှာ မောငျးရငျးမောငျးရငျး သူပဲ စိတျထငျတာလား သူ့ကြောပွငျမှာ ယောကျခမကွီး ၏ နိူ့သီးခေါငျး နူဈ လုံးက ထိုးထိုးထောငျထောငျ နူငျ့ သူ့ကြောပွငျ ကိုကုတျခွဈနသေလို ခံစားနရေသညျ။ ကိုတငျထှတျ မှာ မိနျးမ နူငျ့ ခှဲနရေသညျမှာလညျး နူဈပတျလောကျ ရှိပွီ မို့ လူကလညျး ဆာနခြေိနျဆိုတော့ သူ့ကောငျကွီးက ဘောငျးဘီအထဲ မှာ မာတောငျ တငျးထ နလေိုကျတာ သူ့ ကောငျကွီး ခေါငျးပငျ နာလာရလသေညျ၊ ဒျေါဒျေါလှ မှာလညျး လမျးက ကွမျး၍ ကိုတငျထှတျကို ဖကျထားရတော့ ဆိုငျကယျကလညျး မွငျ့ခညျြနှိမျ့ခညျြ၊မွောကျလိုကျ ပွနျကသြှားလိုကျ နူငျ့ ဆိုတော့ သူမ နိူ့ကွီးတှကေို ကိုတငျထှတျကြောပွငျက ဖိနှိပျ ဆုပျနှယျသလို ခံစားရပွီး နိူ့သီးခေါငျးတှကေ ထောငျထလာရတော့သညျ၊ နဂိုလျထဲကမှ အထိမခံနိူငျ လောကျအောငျ ခံစားမှုပွငျးသော သူ့နိူ့သီးခေါငျးတှကေ ထောငျထလာပွီး ကိုတငျထှတျ ကြောပွငျကို ပှတျသတျမိနတေော့ ဒျေါဒျေါလှမှာ ကာမစိတျတှေ နိူး ကွှလာပွီး သူ့ အဖုတျမှ အရညျကွညျတှပေငျ စီးကလြာခဲ့ရလတေော့သညျ။ ဒျေါဒျေါလှ မှာ ဗမာ အမြိုးသမီး မြားထဲတှငျ ခသေူ မဟုတျဟု ဆိုရမညျ၊ သူက ငယျငယျလေးထဲက ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျ ကို စိတျဝငျစားမှုမှာ တျောရုံ မိနျးခလေး မြားထကျ ပိုမညျထငျသညျ၊ ထို့ကွောငျ့လညျး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယောကျကြား လေး တှေ သတိထားမိ အောငျ ပွငျဆငျသညျ၊ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျ လှအောငျ အပငျပနျးခံကာ လကေ့ငျြ့ခနျးကို ဇှဲကောငျးကောငျးနူငျ့ လုပျသညျ၊ အပြိုရညျ က လညျး ငယျငယျရှယျရှယျ ကထဲက ပကျြခဲ့ရသညျ၊ သူကိုယျတိုငျက ပါလို့ ဖွဈသှားရခွငျးပါ၊ နောကျပွီး ကိုယျ့ အလှ ကိုယျ့ဘျောဒီနဲ့ လညျး ပျေါပြူလာ ဖွဈ ခငျြသညျ၊ ဒါကွောငျ့လညျး မယျရှေးပှဲ တှေ ဘာတှေ မှာ ဝငျပါ သညျ့ အဆငျ့ရောကျသညျ၊ သူ့ နယျ က မယျဘှဲ့ ရအောငျလညျး အကဲဖွတျထဲ မှာ သွဇာညှော ငျးသညျ့ မွို့ မကျြနှာဖုံး လူကွီး
တယောကျကို နညျးနညျး ပါးပါး ကြှေးခဲ့ ရသညျ၊ ဒါပမေဲ့ လှလှ တို့ က ပါးသညျ၊ သူမြား အသုံးခတြာ မခံ၊ ကိုယျ့ တကျလမျး အတှကျ သာ ကိုယျ့ကိုယျကို သုံး သညျ၊ ဒါကွောငျ့လညျးဦးဘတုတျကို အမိဖမျးခဲ့တာ ဖွဈသညျ၊ ဦးဘတုတျတို့ က မြိုးရိုးနဲ့ ခမျြးသာခဲ့ပွီးတော့၊ ဦးဘတုတျ ကိုယျတိုငျကလညျး ကွိုးစား ပွီး ငယျငယျထညျးက မိဘ စီးပှားရေး ကို ဝငျလုပျ နပွေီဖွဈသညျ၊ လှလှ အဲဒီ အခြိနျက ရီးစား နူငျ့ ဘတုတျ က သူငယျခငျြး ဖွဈသညျ၊ သူ့ရီးစား က လူဘျော ကြော့ ဝိတျကလေးဘာလေး ကစားကာ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ အီးယောငျဝါး ငပငျြးဖွဈသညျ၊ လှလှ သူ့ဘဲ ကိုခေါကျ ၍ ကိုဘတုတျနောကျ ကောကျကောကျပါ အောငျ လိုကျသှားလိုကျသညျ၊ ကိုဘတုတျ က ခဈြရေးခဈြရာ မှာလညျး ခသေူ မဟုတျတော့၊ သူတို့ နူဈယောကျ အတှဲညီကွသညျ၊ လှလှ ကလညျး အခွခေဖြို့ တနျပွီ ဟု ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဆုံးဖွတျခကျြခြ ပွီး ခလေး ယူလိုကျသညျ၊ အခုတော့ သမီး နူဈယောကျနူငျ့ သူဌေးကတျော၊ ဘဝ၊ ဦးဘတုတျကလညျးအနူဈ၃၀ ကြျော အတူနလောခဲ့သူ ဆိုတော့ တအိပျယာထဲ တောငျ မအိပျ တော့၊ ဒျေါဒျေါလှ ကလညျး သူ့လို ကတျောခငျြးခငျြး ဖဲရိုကျတာ တို့ ၊ အလှုတို့၊ ပါတီတို့၊ ကို အပငျြးပွသှေားရငျးငယျစရိုကျ ပွနျဝငျလာသညျ၊ တခါတလေ သူတို့ အခငျြးခငျြး လညျး ဘယျသူက ဘယျလို အငယျလေး ထားတယျ ဆိုတာက အစ သရညျ ကြ စရာ အညီ နံ့သငျးသငျးလေး တှေ ပွောဆိုအတငျးခရြငျး စိတျတကျကွှတတျသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှက သူကိုယျတိုငျတော့ အိမျထောငျကပြွီး ကထဲ က တခါမှ မဖေါကျပွနျ ခဲ့ဘူးသေးသျောလညျး၊ ထို အညီအဟောကျ သတငျးလေး အ တငျးလေး တှကွေား ပွီး ရငျ စိတျထထ လာတတျသညျ၊ ငယျစဉျ ရှရေောငျ တောကျခဲ့တဲ့၊ ကဲခဲ့တဲ့ အခြိနျ တှကေို ပွနျတမျးတ လာမိတယျ၊ အခုဆို ဦးဘတုတျကလညျး ထိတောငျ မထိတော့၊ သူကိုယျတိုငျကလညျး ဦးဘတုတျကို ပငျြး နပွေီ မို့ တခါတရံ ကိုယျ့လကျနူငျ့သာ ကိုယျအာသာဖွမေိလသေညျ၊ တခါတလေ ကိုယျ့ဘာသာ မလုံ ရှကျမိလြှငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးလေး ဘာလေး သှား ၊ အလှုဒါနလေး ပွု စသဖွငျ့ လုပျမိသေးသညျ။
အခုတော့ ကိုယျ့သားမကျ ဆိုငျကယျ နောကျမှာလိုကျစီးရငျး အဖုတျ က အရညျတောကျတောကျကြ နရေသညျ၊ ခုတလော သူ့သှေးသားတှေ ကို က သောငျး ကမျြးလှနျး နတောပါ၊ ဒီမွို့ လေးမှာ ပေါလှတဲ့ လပျလပျ ဆတျဆတျ ပငျလယျစာတှကွေောငျ့ မြားလား၊ ဒျေါလှလှ အတှေး မဆုံး ခငျမှာပငျ ကိုတငျထှတျ ဆိုငျ ကယျ က အရှိနျ နှေးပွီး အိမျ တလုံးရှမှေ့ာ ရပျလိုကျသညျ။ …မမေေ ခန ဆငျးလိုကျရအောငျ ဒီအိမျပဲ ကနြျောတို့ရဲ့ အဝယျတျော ရဲ့ အိမျ က… ကိုတငျ ထှတျက သူတို့ အတှကျ ပစ်စညျးကောကျပေးနတေဲ့ အဝယျတျော အိမျရှေ့ မှာ ဒျေါဒျေါလှကို ခနဆငျးစပွေီး သူက ဆိုငျကယျကို အမိုးအောကျ တနရောကို တှနျးရှလေို့ကျတယျ၊ သူ့ဆိုငျကယျ ကိုတှနျးနေ ရငျးနဲ့ မှ အမှတျမထငျ သူ့ယောကျက်ခမကွီး ထမိနျဖွနျ့လှညျ့ဝတျတာ တှလေို့ကျရတဲ့ အပွငျ ထမိနျ နောကျဖကျ မြာပါ အစိုကှကျ တကှကျ တှလေို့ကျရသညျ၊ ဟငျ ယောကျက်ခမ ကွီးရော ငါ့လိုပဲ ဖီးတကျနေ တာလား ဟု ဇဝဇေဝါ ဖွဈသှားလသေညျ။ ကိုတငျထှတျ သူတို့ အဝယျတျောနူငျ့ စကားပွောဆို ငှကွေေးကိစ်စ မြား ရှငျးလငျးပွီးတော့ သူတို့ ရုံးစိုကျရာမွို့ သို့ ပွနျဖို ပွငျကွ သညျ၊ ကိုတငျထှတျ မှာ သူ့ယောကျက်ခမ တှေ မွို့မှာလညျး ခန နားခဲ့ရ၊ နောကျ ဒျေါဒျေါလှ ပါသဖွငျ့လညျး ဆိုငျကယျကို တအားမမောငျးနိူငျ၊ အခု ငှကွေေးကိစ်စ ရှငျးရာမှာလညျး ထငျတာထကျကွာ သှား တော့ နလေေးစောငျးနပွေီ၊ သူအမွနျမောငျး မှ ညကွီးမိုးခြူပျ သူတို့ ရုံးရှိသညျ့ မွို့ ကိုရောကျမညျ၊ ဒျေါဒျေါလှကတော့ ပွောပါသညျ၊ အရမျးမမောငျးပါနဲ့ တကယျလို့ မမှီရငျ လမျးက မွို့သေးသေးလေးတခု မှာ ခနဝငျအိပျပွီး မှ မနကျဆကျသှားမညျ ပေါ့၊ ခရီးတှကေ သိပျမဝေးသျောလညျး ထိုလမျးမြားမြာ နညျး နညျးမှောငျတာနဲ့ ခရီးသှားလို့ မကောငျးတော့ပါ၊ ကိုတငျထှတျက သိ သညျ အဲဒီမွို့လေး မှာ က သူ့ယောကျက်ခမတှေ တညျးလရှေိ့တဲ့ ဟျောတယျ တညျးခိုခနျး အဆငျ့မြိုး မရှိ၊ တညျးခိုခနျးနူံခြာခြာ တခုသာရှိသညျ၊ အဲဒါတောငျ အစိုးရ ဝနျထမျးတှေ အတှကျ အဓိက မို့ အမွဲတမျးလူပွညျ့နလေရှေိ့သညျ၊ ထငျသညျ့ အတိုငျးပငျ၊
သူတို့ ထိုတညျးခိုခနျး ရောကျတော့ အခနျးတှေ အကုနျပွညျ့နပွေီ၊ တခနျးက ဘုတျကငျလုပျထားပွီး မလာကွသေး သို့သျောလညျး အခု အခြိနျမှ မလာရငျ သူတို့ လမျးပနျးအဆကျအသှယျ အရမနကျဖွနျနလေ့ညျမှ ရောကျကွမညျ၊ သို့သျော သူတို့ က ပိုကျဆံရပွီးသားမို့ သူမြားကို မငှားခငျြတော့၊ ကိုတငျထှတျ ဆီ မှ ဘောကျဆူး အမြားကွီးကွောငျ့သာ ထိုအခနျးကို သူတို့ ရလိုကျသညျ၊ ထိုအခနျးက လညျး ကုတငျက တလုံးထဲ ဒါပမေဲ့ နူဈယောကျအိပျကုတငျ၊ ကိုတငျ ထှတျကတော့ ကွမျးပျေါမှာ အိပျမညျဟု ဆိုသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှက အို ကွမျးက ဒီလောကျညဈပတျနတော၊ ကုတငျပျေါမှာပဲ အိပျပါဟု ဟနျမပကျြ ၊ ဘာမှ မ ထူးခွားသလိုပငျပွောသညျ၊ သူ့ရငျထဲ မှာတော့ တဒုတျဒုတျ ဖွဈနပွေီ၊ ကိုတငျထှတျလညျး ဘာထူးလညျး ရငျထဲ မှာ တဒုနျးဒုနျး ၊ ယောက်ခမ မွဈစို့ကွီးနဲ့ တ ကုတငျထဲ အိပျရ မယျဆိုတာ၊ အသကျရူ ပုံမုနျဖွဈအောငျ မနညျးထိနျးနရေသညျ၊ နောကျ ထိုမွို့လေး က တဆိုငျထညျးသော တရုပျစားသောကျဆိုငျလေး မှာ ညစာစားကွရငျး၊ ကိုတငျထှတျကမန်တလေးရမျ တစိတျလောကျ ခလြိုကျသညျ၊ ရမျကို နိ သောကျလိုကျသဖွငျ့ သှေးသားတှေ ဆူလာပွီး နညျးနညျး ပုံမှနျလို ဖွဈသှားသညျ၊ တကုတငျထဲ အိပျရတာ ဘာမှ မထူးပါဘူး ဆိုသညျ့ ပုံဖွငျ့ဒျေါဒျေါလှ ကုတငျပျေါ တကျလှဲတော့ သူက စာဖတျနလေိုကျသညျ၊ ည ၁၀နာရီကြ တော့ တညျးခိုခနျးက မီးစကျ ပိတျသှားသညျ၊ တလောက လုံး မှောငျပိနျး သှားသလိုထငျရသညျ၊ ကိုတငျထှတျက ဖယောငျးတိုငျ မီးလေးတတိုငျ ထထှနျး လိုကျသညျ၊ ဖယောငျးတိုငျ မီးယောငျ ဖွငျ့ မွငျနရေသော ကုတငျပျေါ ဇာခွငျထောငျ အတှငျး၊ သူ့ကို ကြောပေးအိပျနသေော ယောက်ခမ ကွီး၏ ဂဈတာ ရှိတျ ဘျောဒီကို လှမျးကွညျ့မိပွီး သူ့ညီတျောမောငျက တငျးကနဲ ဖွဈလာသညျ၊ သူ့မိနျးမ ဝငျးပပ နဲ့ တပုံစံထဲ မို့ လညျး သူ့ အကွညျ့က စားနကွေ အစာကို ကွညျ့ သညျ့ ကြားတကောငျ အကွညျ့လို စူးရဲနသေညျ။
ဒျေါဒျေါလှ တယောကျ ရငျတှေ တဒိတျဒိတျခုနျရငျး အဖုတျတှငျးမှာတော့ အရညျ တှေ စိမျ့စိမျ့ကနြသေညျ၊ သူငယျစဉျ အပြို ဘ၀ တုနျးက အတှေ့ အကွုံတှေ မှာ အမြားကွီး ဖွဈပွီး၊ ကိုဘတုတျနူငျ့အိမျထောငျကပြွီးကာ မှ သာ တခြောငျးကိုငျ အဖွဈ နခေဲ့ သညျမှာ နူဈပေါငျး အတျောကွာခဲ့ ပွီဖွဈကွောငျး တအံ့တ သွ တှေး နမေိသညျ၊ သူ့သူငယျခငျြး ဟော့ရှော့ ကောငျမတှေ တခါငှား အနှိပျခံ သော ကောငျလေး နူငျ့ အနှိပျခံခဲ့စဉျ တုနျးကလညျး တစိမျးယောကျကြား တ ယောကျ အထိ အတှေ့ ကို မခံရ တာကွာတော့ အရညျတှေ တစိမျ့စိမျ့ စီးခဲ့ရသညျ၊ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့သိက်ခာနူငျ့ ဂုဏျသရညျ၊တျောကွာ ဘာမှနျးမသိရသညျ့ တ စိမျး ကောငျပေါကျစလေးကွောငျ့ စားရတာနူငျ့ မတနျ မရာ ကိုယျကြိုးနညျး မှာ စိုး၍ အတငျး စိတျထိနျး ခဲ့သညျ၊ အခုကတော့ ကိုယျ့ သားမကျ အရငျးခေါကျ ခေါကျ၊ ကိုယျ့မိသားစု ထဲက ဆိုတော့ အပွငျလညျး မပေါကျကွားနိူငျ၊ သမီးသိသှားမှာ စိုး၍ ဒီကောငျလညျး အပွငျမှာ အာရဲမညျ မဟုတျ၊ နူဈယောကျထဲ ကု တငျတလုံးထဲမှာ အိပျရမှာ ဆိုတော့ အခွေ အနကေတော့ တအားတှနျးပို့နပွေီ၊ တခုပဲ ရှိတယျ၊ ဒီကောငျက ငါ့ကို အဖှားကွီး ဆိုပွီး စိတျဝငျစားပါ့မလား၊ ငါက စလိုကျရငျကော၊ ယောကျကြားဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးလဲ နငျသိတာပဲ မိလှ ရယျ လို့ ကိုယျ့ ကိုကိုယျပွောရငျး အတှေးတှေ ခြဲ့နမေိတယျ၊ အဲဒီ အခြိနျမှာပဲ ကုတငျသိမျ့ကနဲ တုနျသှားပွီး တငျထှတျကုတငျပျေါတကျလာတာ သိလိုကျ တယျ။ အရကျ အရှိနျ လေးနူငျ့ အမှောငျအားကိုး ပွီး ကိုတငျထှတျတယောကျ ဘယျလိုစရမညျ မှနျးမသိ တော့ အိပျပြျော နသေလား မသခြောသာ ယောကျက်ခမ ကွီး အနောကျက အသာကပျ၊ သူ့ထောငျမတျ နသေော လိငျခြောငျး ကွီး ၏ ထိပျဖွငျ့၊ ဒျေါလှ ဖငျကွားလှမျး ထောကျလိုကျသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှ မှာ ခနတော့ ငွိမျနပွေီးနောကျ ကိုယျ ကိုပကျလကျလှနျ လိုကျကာ ကိုတငျထှတျ လိငျ ခြောငျးကွီးကို ပုဆိုးပျေါမှ ပငျ အုပျကိုငျလိုကျ သညျ၊ ရုတျတရကျ လနျ့ သှားပွီး ဘာလုပျရမှနျး မသိ ဖွဈနသေော ကိုတငျထှတျမှာ သူ့ယောက်ခမကွီး က သူ့ လိငျခြောငျးကွီး ကို ပုဆိုးပျေါမှ ဖှဖှလေး ဆုပျကိုငျကာ ပှတျသတျပေးနကွေောငျး သိလိုကျရတော့ သူ့လကျတှကေ အလိုလို ယောက်ခမ ကွီး ရှရေငျအစုံပျေါ ရောကျသှားတော့သညျ၊
….အငျ့.အငျး….အူး… မှောငျထဲ မှ ဗလုံးဗထှေး ငွီးသံ ငွူသံ တို့ဖွငျ့ အတှေ့ အကွုံရှိနကွေသော သူနူဈဦး၏ ရမကျ ပွငျးပွငျးဖွငျ့ လှုပျရှားမှု သံစဉျတှေ က ပျေါထှကျ လာသလို၊ အမှောငျထဲ တှငျ တယောကျကို တယောကျ အဝတျအစားတှကေို အလုအယကျ ဆှဲခြှတျနကွေတော့သညျ၊ ကွီးမားဖှငျ့ထှားလှသော ဒျေါဒျေါလှ နိူ့ကွီး နူဈလုံးမှာ ကိုတငျထှတျ လကျဖဝါး နူဈခုအောကျတှငျ နံပွားရိုကျခါနီး ဂြုံနယျ သလို အနယျခံနရေပွီး ကိုတငျထှတျ လိငျခြောငျးကွီး မှာ လညျး ဒျေါဒျေါလှ လကျထဲ မြောကျငှကျပြောသီး ရသလို ပှတျသပျဆောငျ့ဆှဲ အလုပျခံနရေလသေညျ၊ ဒျေါဒျေါလှပေါငျကွီး နူဈလုံးကို ကားပေးပွီး ကိုတငျ ထှတျ လိငျခြောငျးကွီး ကို ဆှဲယူလိုကျတော့ ကိုတငျထှတျက အလိုကျသငျ့ ပငျ ဒျေါဒျေါလှ ပေါငျကွားထဲနရောဝငျယူလိုကျသညျ၊ ဒျေါဒျေါလှက ကိုတငျထှတျ လိငျခြောငျးထိပျဖူး ကို သူ့ အဖုတျ ၀ မှာ တေ့ ပေးလိုကျတာနဲ့ အောငျ့နရေသညျ ကွာပွီ ဖွဈတဲ့ ကိုတငျထှတျက စိကနဲ ဆောငျ့ထိုး ပဈလိုကျ၏၊ … အား..အိ..ဖွေးဖွေး လုပျပါကှာ မောငျတငျထှတျကလညျး… …ဆောရီး မမေေ ..ကနြျော လောသှားတယျ…ကနြျောလညျး အဲလောကျ …အငျး… …ဘာလဲ ကပျြမယျမထငျဘူးလို့ ပွောမလို့လား..ဟငျး..ငါက သမီး နူဈယောကျလုံးကို ဗိုကျခှဲ မှေးလာတာ၊ နောကျ ကိုဘတုတျနဲ့ လညျး မအိပျ ဖွဈတာ နူဈပေါငျး ကွာ နပွေီ… …ဟုတျ ..ဟုတျ..မမေေ.. ..ဟဲ့..နငျက ငါ့ကို လုပျနပွေီး မမေေ မမေေ နဲ့ မချေါနဲ့ အဲဒါ လူရှကွေ့မှ ချေါ… …ဟုတျ..ဟုတျ..ကဲ့ ..မမ.. ကိုတငျ ထှတျ စိတျထဲ မတော့ ဒီမိနျးမကွီး အောကျက နတောတောငျ လကေ မလြှော့ သေးဘူး အာဏာ သံ ကွီးပဲ ၊ ကွညျ့နေ ၊ကောငျးကောငျးလိုးပွလိုကျ အုနျး မယျ၊ နောကျ တော့ မှ ကိုကိုတငျ ကမြ ကို လုပျပေးပါအုနျး ဖွဈနစေရေမယျ၊ ဟု ကွိမျးဝါးရငျး အားကွိုးမာနျတကျ ဆောငျ့တော့သညျ။
ဒျေါဒျေါလှ မှာလညျး မစားရတာကွာလို့ တောငျးတမိသော အရာ ကို ပွညျ့ပွညျ့ ၀၀ ခံစားနရေသဖွငျ့ အရသာ အထူး တှနေ့ရေလသေညျ၊ သူကိုယျသူပငျ မေ့ နပွေီ ထငျသော အတှေ့ အကွုံမြားကလညျး အလိုလို ပွနျပျေါလာ ခဲ့သဖွငျ့ ကိုယျခန်ဓာ အစိပျအပိုငျးမြားက သူ့အလိုလို လှုပျရှားနပေတေော့သညျ။ သူ့ ပေါငျ လုံး နူဈလုံးမှာ ကိုတငျထှတျ ခါးကို ညပျြလြှကျ သူ့ခွသေလုံး မြားဖွငျ့ ကိုတငျထှတျ ဖငျကို ဖိ၊ သူ့ဖနောကျမြားဖွငျ့ဆှဲဆှဲ သှငျးလရော ကိုတငျထှတျ ဆောငျ့ သညျ့အခါတိုငျး သူကအားကူပေးသလို ဖွဈသဖွငျ့ ဆောငျ့ခကျြမြားမှာ ပွငျးရသလို၊ တိုငျပငျကလညျး ကိုကျနပေတေော့သညျ၊ သူ့ နိူ့ကွီး နူဈလုံးကို ကိုတငျ ထှတျ ရငျဘတျမှာ ဖိကပျထားပွီး ကိုတငျထှတျကွောပွငျကွီး ကိုလညျး သူ့ လကျသညျးကလေး မြားဖွငျ့ ကုတျခွဈပေးလသေညျ၊ သူ့ ဖငျကွီး ကိုလညျး ငွိမျ ငွိမျ မခံ ပဲ စကောဝိုငျး လို လှညျ့ပေးလရော၊ သူ့ အဖုတျ နံရံ အနှံ့ အပွားကို ကိုတငျထှတျ လိငျခြောငျး ကွီး က ပှတျတိုကျမိနလေတေော့သညျ။ နူဈယောကျ စလုံးမှာ အတှေ့ အကွုံရှိသူမြားဖွဈ ကွသဖွငျ့ ကာမအရသာကို ကောငျးကောငျး ခံစားကွရသျောလညျး နူဈယောကျစလုံးမှာ ပွတျလပျနကွေတာ လညျး ကွာပွီမို့ သိပျအကွာကွီး မခံပေ၊ နူဈယောကျစလုံး တပွိုငျနကျထဲ ပထမဆုံး ကာမ အရသာ အထှတျအထိပျ ရောကျသှားကွပွီး တယောကျကို တယောကျ တငျးတငျး ကပျြကပျြ ဖကျထားရငျး ကောငျးကောငျးကွီး မှိနျးကာ၊ အရသာခံနကွေလတေော့သညျ။ ကိုတငျထှတျ အိပျယာက နိူးလာတော့ အာရုံဦး အလငျးရောငျက အခနျးထဲ ထိုးဝငျနပွေီ၊ သူ့ ဘေးမှာတော့ သူ့ ကို ကြောပေးပွီး အိပျနသေော ယောက်ခမ ကွီး ဒျေါလှလှ ကို တှလေို့ကျရသညျ၊ သေးအရမျး ပေါကျခငျြ လှသဖွငျ့ ကမနျးကတနျး ထပွီး အိမျသာသို့ ပွေးရလသေညျ၊ သေးပေါကျပွီး သှား၍ ဘေးနားက ရခြေိုးသညျ့နရော သံမနျတလငျး မှာ ထိုငျပွီး ရခှေကျနူငျ့ သူ့ လိငျတနျကွီး ကို သသေခွောခွာ ဆေးကွောလိုကျသညျ၊ ထိုအခိုကျ ရုတျတရကျ အခနျးတံခါး ပှငျ့သှားတော့ လနျ့သှားသျောလညျး ဒျေါလှလှ ဖွဈနေ၍ ပွုံးပွီး နူတျဆကျလိုကျသညျ။
…ဟော မမေေ နိူးလာပလား… ..အငျး ရူးပေါကျခငျြလို့ …အိပျတာတော့ မဝသေးဘူး.. ကိုတငျထှတျက လှမျးနူတျဆကျလိုကျသျောလညျး လကျကမူ သူ့ လိငျတနျကွီး ကို ရဆေေး မပကျြ၊ သူ့လိငျတနျကွီး ကလညျး အိပျရေးဝထားတော့ အားတှေ ပွနျပွညျ့ကာ မာမာဖောငျးဖောငျးကွီး ဖွဈနေ၏၊ ဒျေါဒျေါလှ မကျြလုံးတှကေ သူ့လိငျတနျကွီးပျေါ မှာ ရောကျနတောတှတေ့ော့ သူ့ ကောငျကွီး က ပိုကွီး ဖောငျးတငျးမာ လာ၏၊ ကိုတငျထှတျ က အခနျးထဲ က ထှကျ သှားမှ ဒျေါလှလှတယောကျ အိမျသာပျေါထိုငျ ကာသေး တရှီရှီ ပေါကျတော့သညျ၊ ကိုတငျထှတျတယောကျ အိပျယာဘေး မှ ရဘေူး ကို ယူသောကျပွီး ပွတငျးပေါကျ ကို အသာလှပျ ၍ နံနကျခငျး လပွေအေေးလေးကို ရူရိုကျနေ ၏၊ ထိုစဉျ ရခြေိုးခနျးထဲ မှ ရေ တဗှမျးဗှမျး လောငျးနသေံကွား တော့ ယ်ခောမ ကွီး ရခြေိုးနပွေီ ဟု သိလိုကျရသညျ။ ညတုနျးက ယောက်ခမ ကွီး ကို လိုးလိုကျရတာ ကောငျးလိုကျတာ ဟု ပွနျတှေး မိတော့ သူ့ လိငျတနျကွီး မှာ ပွနျ ထောငျထလာ၏၊ အငျး ယောက်ခမ ကွီး ရခြေိုးနတေယျ ဆိုတော့ ငါလညျး သှားတိုကျမှ ရတော့မယျ ဟုတှေးရငျး ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျလာခဲ့မိသညျ၊ ဟိုကျ ယောက်ခမကွီး က ကိုယျလုံးတီးနဲ့ ခြိုးနပေါလား၊ ကိုတငျထှတျက မထူးဆနျးသလို အမူအယာဖွငျ့ သူ့သှားပှတျတနျထုတျ သှားတိုကျလြှကျ ယောက်ခမ ကွီး ရခြေိုးနတော ကို ပျေါတငျကွညျ့နလေိုကျ၏၊ ဒျေါဒျေါလှ ကလညျး ခတျတညျတညျ ပငျ သူ့ ဘေးတှငျ သှားတိုကျနသေော ကိုတငျထှတျကို မေးဆပျ ပွီး နူတျ ဆကျလိုကျရငျး၊ …ခြှေးတှနေဲ့ အိုကျစပျစပျမို့ ရတေခါထညျး ခြိုးလိုကျတယျ.ကှာ..မငျးရော မခြိုးဘူးလား.. …အငျး..ခြိုးမယျလေ.. ကိုတငျထှတျ တ ယောကျ ဖိုးကြိုငျးတုတျ ဖွဈသှား၏၊ ကမနျးကတနျး ပါးလုပျကငျြး၊ အငျးကြီလုံခွညျခြှတျပွီး ဒျေါဒျေါလှ ဘေး ဝငျကာ ရခေပျ ခြိုးလိုကျ၏၊ သူ့ဘေးနားက ဆပျပွာတိုကျနသေော ဒျေါဒျေါလှ ကို လှမျးကွညျ့ပွီး၊
…မမေေ ကနြျော ကြော ကိုတိုကျပေးမယျလေ.. ဒျေါဒျေါလှက ခေါငျးငွိမျ့ပွတာနဲ့ ကိုတငျထှတျ ဆပျပွာတုနျး ကောကျယူ လကျဖွငျ့ ပှတျကာ ဒျေါဒျေါလှ ကြောပွငျ ကို ဆပျပွာမွုပျထ အောငျ ပှတျပေးနတေော့သညျ၊ ဒျေါဒျေါလှ ကြောပွငျမှ တဆငျ့ ခါး နောကျတော့ တငျလုံး ကွီးတှေ၊ ကို ပှတျသပျပေးနရေငျး၊ အားမလိုအားမရ ဖဈြညဈလိုကျသေးသညျ၊ နောကျတော့ ပေါငျတနျခွသေလုံး၊မြား၊ ယောက်ခမ ကွီး နဲ့ နူဈယောကျထညျး ကိုယျလုံးတီး ရခြေိုးနရေသညျ့ အပွငျ တကိုယျလုံး ကိုလညျး ဆပျပွာတိုကျပှတျပေးနရေတော့ ကိုတငျထှတျ လိငျခြောငျး ကွီး မှာ၊ သံခြောငျးကွီး လိုမာတောငျ နလေပွေီ၊ ကိုတငျထှတျက သူ့လကျနူဈဖကျဖွငျ့ ဒျေါဒျေါလှ ပေါငျအရှပေို့ငျးကို သိုငျးဖကျလြှကျပှတျသတျပေးရာ ဘာမှ မပွောသဖွငျ့ ဝမျးပွငျမှ တဆငျ့ ဒျေါဒျေါလှ နိူ့ကွီး မြားကိုပါ ဆပျပွာမွုပျ တှေ ဖွငျ့ ပှတျသပျ ဆုပျနှယျ ပေးနတေော့သညျ၊ ထိုကဲ့သို့ အနအေထားကွောငျ့ ထောငျမတျနသေညျ့ ကိုတငျထှတျ လိငျတနျကွီး မှာ ဒျေါဒျေါလှ ဖငျလုံးကွီး နူဈခုကွားမှာ လှထိုးသကဲ့သို့ ပှတျတိုကျ မိနလေသေညျ၊ ဒျေါဒျေါလှမှာ လညျး ကိုတငျထှတျ ၏ အပှတျအသတျ အဆုပျ အနယျ ကွောငျ့ ကာမ ဆိပျ တကျလာပွီ ဖွဈရာ က ၊ ကိုတငျထှတျ ဒုတျကွီးက သူ့ဖငျကွားတိုးဝငျ လြှောတိုကျနတေော့ ဒူးမြားပငျ ညှတျခှခေငျြ လာသဖွငျ့ သူ့ကြောကို ကိုတငျ ထှတျ ရငျခှငျထဲ မှေး လြှကျ မှီထားရငျး ကိုတငျထှတျ ကိုယျလုံးကို လကျနောကျပွနျ ကိုငျလြှကျ ခိုထားမိလသေညျ၊ ကိုတငျထှတျ မှာ အရမျးအရမျး ကို စိတျထ လာပွီ ဖွဈသဖွငျ့၊ ဒျေါဒျေါလှ လကျနူဈဘကျကို ကိုငျကာ ရကေနျဘောငျ ပျေါ ထောကျကိုငျ စေ လိုကျပွီး ဒျေါဒျေါလှခါးကလေး ကို ဆှဲလြှကျ ဖငျကို ကုနျး ခိုငျးလိုကျသညျ၊ အုတျကနျ ဘောငျကို လကျနူဈဘကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျလြှကျ ခါးကို နိမျ့ကာ ဖငျကို ကော့လိုကျသဖွငျ့ ဒျေါဒျေါလှ ဖငျကွီး မှာ ကားပွီး စှငျ့ တကျလာ၏၊ ကိုတငျထှတျက ဒျေါဒျေါလှ ပေါငျနူဈလုံးကို ခြဲရပျစပွေီး ပေါငျခှဆုံကွားမှာ ကှဲအာ နသေော အဖုတျဝ တှငျ သူ့ဒုတျကွီး ကို တကေ့ာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖိသှငျးလိုကျလသေညျ။
..အား….ရူး…. ဒျေါဒျေါလှ နူတျဖြားမှ ညညျးတှား သံလေး ထှကျလာ၏၊ မာကွောကွော ပူနှေးနှေး အခြောငျးကွီးက သူ့ အဖုတျအတှငျးသားနုနုလေး ကို တိုး တိုကျ ဝငျလာလို့ အာရုံကွောတှကေ စိမျ့သှားအောငျ ကောငျးသောကွောငျ့ ဖွဈလသေညျ။ အကွံသမား ကိုတငျထှတျက ဒျေါဒျေါလှ အဖုတျထဲ သူ့ လိငျတနျ ကွီး ကို ဖွေးဖွေးခငျြး အသှငျးထုတျ လုပျနရေငျးက ဆပျပွာတုနျး အပဲ့လေးကို ဒျေါဒျေါလှ ခရပှေငျ့လေးထဲ သူ့လကျမ ဖွငျ့ ထိုးသှငျးပေးနေ၏၊ သူ့ လကျမ တဆဈ အေးဆေး ဝငျသှားသျောလညျး ဒျေါဒျေါလှ ထံမှ ငွငျးဆနျသော အသံ မကွားရသဖွငျ့ လကျညိုးနူငျ့ လကျခလယျ နူဈခြောငျး ဝငျအောငျ ဖွညျးဖွညျး ခငျြး ကစား ပေးနလေသေညျ၊ သူ့ လိငျခြောငျးကွီး ကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးသာ အဝငျအထှကျလုပျပေးနသေဖွငျ့ အရှိနျတကျနသေော ဒျေါဒျေါလှ တယောကျ ဖငျ ကွီး ကို ကော့ကာကော့ကာ လိုကျလိုကျ လာပရော၊ ကိုတငျထှတျ ၏ လကျနူဈခြောငျးက လညျး ဒျေါဒျေါလှ ဖငျပေါကျ ကို ရှောရှောရူရူ ဝငျနိူငျအောငျ လုပျ ပေးနသေလို ဖွဈနတေော့သညျ။ ထိုအခါ ကိုတငျထှတျက သူ့လိငျတနျကွီး ကို ဒျေါဒျေါလှ အဖုတျတှငျးမှ ဆှဲခြှတျလိုကျရာ ဒျေါဒျေါလှ ခမြာ ဟာကနဲ ဖွဈသှား ရလသေညျ၊ သို့သျောလညျး ထို အတနျထိပျခေါငျးက မိမိဖငျပေါကျ ၀ ကို တိုးလာနကွေောငျး သိရသဖွငျ့ အတှေ့ အကွုံ ရှိသူ ပီပီ ဖငျဝ ကွှတျသား ကို အသာ လြှော့ပေးလိုကျလသေညျ။ သို့သျောလညျး စိုးရိမျစိတျဖွငျ့ ကိုတငျထှတျ ကို လှမျးသတိပေးလိုကျ၏၊ …ဖွညျးဖွညျး ကှဲ့ မောငျတငျထှတျ..မငျးဟာကွီး က တုတျတယျ၊ အရမျး ဆောငျ့မထိုးနဲ့ ခြော့သှငျး၊ တျောကွာ ငါ့ဖငျပွဲသှားအုနျးမယျ..
..ဟုတျ..ဟုတျ..မေ…အျော..မ..မ…. ကိုတငျထှတျ က ယောက်ခမကွီး အတှအေ့ကွုံ တျောတျော ရှိတာပဲ ဟု တှေးလိုကျမိသညျ၊ သူ့ မိနျးမ ဝငျးပပ ကို ဖငျခြ ရဖို့ သူ မနညျး သိမျးသှငျးခဲ့ရသညျမဟုတျလား၊ နူဈယောကျ စလုံး အတှေ့ အကွုံရှိတော့ လညျး သိပျမကွာခငျ ပငျ ကိုတငျထှတျ လိငျတနျကွီး ဒျေါဒျေါလှ ဖငျ ပေါကျထဲ အဆုံးထိ ဝငျရောကျသှားပါတော့သညျ၊ ကိုတငျထှတျ မှာ ထိုအခါမှ အပီ အပွငျ နရောယူ ဒူးကှေးညှတျ ကာ ဒျေါဒျေါလှ ခါးလေးကို ကိုငျကာ ဆှဲဆှဲ ဆောငျ့လတေော့သညျ၊ ဒျေါဒျေါလှ ၏ ရစေို ပွီး ဝငျးပွောငျနသေော တငျသားစိုငျကွီး မြားက ကိုတငျထှတျ ပေါငျခွံ ဖွငျ့ ဖတျကနဲ ရိုကျဖိ မိတိုငျး တုနျကနဲ တုနျကနဲ ကြောကျကြောတုနျး ကွီး မြားလို ဘေးတဘကျ တခကျြ စီသို့ လိမျ့လိမျ့ သှားပုံကလညျး ကွညျ့ကောငျးလှပသေညျ၊ ဆပျပွာရညျ မြား ရှိနေ သျောလညျး တငျးကပျြ လှသညျ့ ဒျေါဒျေါလှ ဖငျပေါကျ ၀ ၏ ဖဈြညှဈမှု အားကွောငျ့ ကိုတငျထှတျ မှာ ကွာရှညျတော့ မဆှဲ နိူငျပါ၊ ခန အတှငျးမှာပငျ အားပွငျး လှသော သုတျရညျ မြားက သူ့ လိငျခြောငျး ထိပျမှ ဖြောကနဲ ဖြောကနဲ ဒျေါဒျေါလှ ဖငျခေါငျးထဲ မှာ ပနျးထှကျသှားရရှာတော့သညျ။ ကုတငျ ပျေါ ဖငျထောငျ ကုနျးပေး နသေော ယောက်ခမကွီး ကို အားရ ပါးရ အနောကျက နေ ဆောငျ့လိုး နသေော ကိုတငျထှတျ တယောကျ သူ့ အခနျးထောငျ့ စားပှဲ ပျေါက တဂှမျဂှမျ မွညျလာသော ဖုနျးသံကွောငျ့ နာရီ ကို လှမျး ကွညျ့ လိုကျသညျ၊ အငျး စနနေေ့ ဒီ အခြိနျ ဆို ရငျ သူ့ မိနျးမ ဝငျးပပ ပဲ ချေါတာ ဖွဈရမယျ ဟု သိလိုကျသညျ။ ယောကျက်ခမ ကွီး သူ့ လကျကို အတငျးဆှဲ နသေညျ့ ကွားမှ ရုနျးထှကျပွီး သူ့လိငျတနျကွီး ကိုလညျး ဒျေါလှလှ အဖုတျတှငျး မှ ဖေါကျကနဲ မွညျအောငျ ဆှဲ ထုတျလိုကျပွီး တယျလီဖုနျး ရှိရာသို့ ဒုတျတနျးလနျး နူငျ့ ပွေးသှားလသေညျ၊ တယျလီဖုနျးဘေးက ကုလားထိုငျမှာ ထိုငျပွီး ဖုနျးကို ကောကျကိုငျလိုကျတော့ ဟောဟဲ လိုကျပွီး သူ့ အသကျရူသံတှေ က မွနျနသေညျ။
…ဟေး အခဈြလား ဘယျလိုလဲ အစဉျပွရေဲ့လား… …ပွပေါတယျ ကို ရော ဘယျလိုဖွဈနတောလဲ အသံက မောနတောလား… ကုတငျ ပျေါ မှာ တနျးလနျး ကွီး ကနျြခဲ့သော ဒျေါဒျေါလှ ကိုတငျထှတျ ထိုငျနရော သို့ ကိုယျလုံးတီး ဖွငျ့ပငျ လြှောကျလာပွီး ကိုတငျထှတျ ကုလားထိုငျဘေးမှာ ဒူးထောကျရကျဖွငျ့ ကို တငျထှတျ လိနျတနျကွီး ကို ငုံစုပျလိုကျသညျ၊ ကိုတငျထှတျက ယောက်ခမ ကွီး လညျဂုတျ ကို သူ့လကျဖဝါး တဘကျဖွငျ့ ပှတျသပျပေးရငျးက ဖုနျးဆကျပွော နလေိုကျသညျ။…အေး အခု ကိုယျက အိပျဆယျဆိုကျ လုပျနတေုနျး တနျးလနျး ကွီး ဝငျး က ချေါလို့လေ.. မမြိုး တို့ ပွနျရောကျပွီလား… ..မမြိုး တို့ မရောကျ သေးဘူး မနျးဒေး ရောကျမယျ ထငျတယျ…ကို့ ဆီမှာ မမေေ ရောကျနတေယျ ဆို.. …ဟုတျတယျ မနကျဖွနျ ဖဖေေ့ ဆီ ပွနျပို့ပေးရမယျ… …အခု မမေေ က ဘာလုပျနလေညျး … …အျော ဗိုကျဆာလို့တဲ့ ငှကျပြောသီး စားနတေယျ… ကိုတငျထှတျ က သူ့ ကို ပုလှပေေးနသေော ယောက်ခမ ကွီး ကို ငုံ့ ကွညျ့ပွီး ပွုံး လိုကျသညျ။ ….ခိခိ မမေေ ကတော့ လုပျပွီ၊ မမေေ့ ကို ဂရုစိုကျလိုကျနျော ကို၊… …အငျးပါ ကို သခွော ဂရုစိုကျထားပါတယျ၊ လိုလသေေးမရှိလေ ၊ သူဘာ ဖွဈခငျြသလဲ… ယောကျမက်ခ ကွီးက ပုလှမှေုတျနရေငျးက ကိုတငျထှတျ ကို မကျြစောငျးတခကျြ မေ့ါထိုးလိုကျသညျ။
အဲဒီနေ့ တနလေုံ့း အပွငျ မထှကျကွပဲ ကိုတငျထှတျ နဲ့ ဒျေါဒျေါလှ ၊ ကိုတငျထှတျ အခနျးထဲ မှာ တနကေုနျ လိုးကွသညျ၊ ဗိုကျဆာရငျ အနားက ဒလိဗာရီလုပျ ပေးသော ထမငျးဆိုငျက လှမျးမှာ ပွီး စားကွသညျ၊ ကိုတငျထှတျ တယောကျ သူ့ မိနျးမ ဝငျးပပ သာ သူ့ ယောက်ခမ ကွီး လို အရှကျကုနျပွီး အပေးကောငျး လိုကျ ရငျ ဘယျလောကျကောငျးမလဲ တောငျ တှေးမိသညျ၊ ပုံစံ မြိုးစုံ ကို နူဈယောကျစလုံး ငတျငတျ နူငျ့ အသတေီးကွတော့သညျ၊ အချေါ အဝျေါက တော့ နူ တျကြိုးနတောလညျး ပါ၊ နောကျ ဆိုလညျး သူမြားရှေ့ မှားချေါမိမှာစိုးလို့ မပွောငျးကွ ၊ မောငျတငျထှတျ နူငျ့ မမေေ ပဲ ချေါကွ ပွောကွသညျ၊ တနလေုံ့း ဆျောကွသဖွငျ့ ညကတြော့ မတတျနိူငျကွတော့ အိပျမောကြ သှားကွသညျ၊ မနကျ အစောကွီး အိပျယာနိူးတော့ အားပွညျ့နေ ကွပွီ မို့ နူဈယောကျသား တ ဖုံးဖုံး ဆျောကွသညျမှာ ကိုတငျထှတျ သူ့ ယောက်ခမ ကွီး ကို သူတို့ နသေညျ့ မွို့ ပွနျလိုကျပို့ ခါနိး အထိ ဖွဈလသေညျ။
ဦးဘတုတ် ဇနီး ဒေါ်ဒေါ်လှ မှာ ငယ်စဉ်က သူတို့ နယ်က မယ်ဘွဲ့ရထားခဲ့ဘူးသူ ဖြစ်ပြီး၊ အသက်ကလေး ရလာသော်လည်း ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း အမြဲလုပ်နေသဖြင့် သမီး များကပင်အားကျ လောက်အောင်၊ နုနယ်နေပေသေးသည်၊ ဦးဘတုတ်က ဒေါ်ဒေါ်လှကို သူတို့ မြို့နူင့် မိုင် ၂၀ ခန့်ဝေးသော် တိုင်းမြို့ကြီး ကို သွားလည်ဖို့ ပြောနေ၏၊သူတို့ သားမက် ကိုတင်ထွတ် လည်း ရောက်နေသည်၊ ဆိုတော့ သွားချင်တဲ့ နေရာ လိုက်ပို့ပေးခိုင်းလို့ ရမည်ပေါ့တနေ့ သူတို့ ရှိရာသို့ ကိုတင်ထွတ် တယောက် ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာခဲ့သည်၊ သူတို့ မြို့လေးမှ မိုင် အနည်းငယ်ဝေးသော ရွာတရွာတွင် အလုပ်ကိစ
္စ အတွက်သွားစရာရှိရာ၊ မှ ယောက္ခမ ကြီးတွေ ရောက်နေသည် ကြားလို့ လှည့်ဝင်လာခြင်းဖြစ်လေသည်။ ထိုဒေသ နယ်ပယ်တွင်း တွင် ကားလမ်းများမှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကထဲ က ဖေါက်ခဲ့သော လမ်းများကို မပြုမပြင်ပဲ သုံးနေကြတုန်းမို့ ကားအသုံးနည်းပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ် များသာ အသုံးများလေသည်၊ ကိုတင်ထွတ်ကလည်း ထုံစံအတိုင်းသူ့ ဘီအက်အေ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီး တဖုန်းဖုန်းနူင့်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်လေသည်၊ ဦးဘတုတ်က တော့ သူ့ဘာသာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် နေခဲ့ခြင်တာနဲ့ အတော်ပဲ
ဆိုပြီး ဒေါ်ဒေါ်လှကို ကိုတင်ထွတ်နူင့် တရက်နူစ်ရက်လိုက် သွားလည်ဖို့ ပြောသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှက လည်း ပျင်းတာနဲ့ လိုက်မယ်ဆိုပြီး အထုတ်တထုတ်စာပဲ ဆွဲ ပြီး လိုက်ဖို့ပြင်သည်၊ ကိုတင်ထွတ်က သူသွားမည့်ရွာမှာ အောက်ကို ထပ်ဆင်းရပြီးမှ မြို့ ကို အထက်ပြန်တက်ရမှာမို့ ယောက်က္ခမ ကြီး ပင်ပန်းမှာစိုး၍ အပြန်ဝင်ခေါ်ပါမည် ဟုပြောသေး၏၊ သို့သော် သူသွားမည့် ရွာ၊ ယခု ဒေါ်ဒေါ်လှ တို့ နေရာ နူင့် သူတို့ ရုံးခွဲ ရှိသည့် မြို့ တို့ မှာ ဖိုခနောက်ဆိုင် တည်ရှိသဖြင့် တကူးတက ပြန်ဝင်ခေါ်နေရမည်၊ ထိုရွာ ပတ်ဝန်းကျင် ရူခင်းများက လည်း လှသည်ဟု နာမည်ကျော်သဖြင့် ဒေါ်ဒေါ်လှက အခုထည်းက လိုက်မည် ဆိုတော့ လည်း မငြင်းဆန်ရဲ၊ သူ့ ဆိုင်ကယ် အနောက်မှာ တင်၍ခေါ် လာခဲ့ရတော့ သည်။ သူတို့ မြို့ကလေး အပြင်ရောက်တာနဲ့ လမ်းက ကြမ်းပြီ၊ ဒါတောင် ကိုတင် ထွတ်က သူ့ဆိုင်ကယ်ကို ကျွမ်းကျင် စွာဖြင့် ချိုင့်တွေ ခွက်တွေကို ရှောင်မောင်းသည်၊ ယောက်ခမကြီးကလည်း ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ပြုတ်ကျမှာ စိုးလို့ သူ့ခါး ကို တင်းတင်းဖက်လာသည်၊ ယောက်ခမကြီးရဲ့ ဖောင်းတင်းနေတဲ့ နိူ့ကြီးတွေက ကိုတင်ထွတ် ကျောပြင် ကိုလာဖိမိနေ သည်၊ ကိုတင်ထွတ်တယောက် စိတ် ကို မနည်းထိန်း၊ ဆိုင်ကယ်လက်ကိုင်ကို မနည်းထိန်းမောင်း နေရသည်၊ သူ့ယောက်ခမကြီး မှာ ငယ်ငယ်က မယ် ရခဲ့ဘူးသူဖြစ်မှန်းလည်းသိသည်၊ သူ ဝင်းပ ပ နူင့် ရကတဲက သူ့သူငယ်ချင်းတွေက နောက်ကြ သည်၊ ကိုယ့်မိန်းမ ကြီးလာရင် ဘယ်လိုပုံဖြစ် မလဲ ဆိုတာ အမေ ကိုကြည့်ရမည်လို့ ဆိုကြသည်၊ ဒေါ်ဒေါ် လှမှာ ဝင်းပပ နူင့် အပြိုင် လှဆဲ ဖြစ်သည်၊ ဝင်းပပ ကလည်း တော်တော် တောင့်သော အမျိုးသမီးဖြစ်သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှကတော့ အသက်ကလေး ရလာ တော့ ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့် လေးလို့
ထင်ရပေမဲ့ ကြီးတာတွေက သူ့နေရာနူင့်သူ အချိုးကျ နေသေးသည်၊ ဝင်းပပ နောက် အနူစ် ၂၀ အဲလိုပုံမျိုးဖြစ်လာ လို့ကတော့ အောင်မလေး ဖိုးကျိုင်းတုတ်ပေါ့၊ ဝင်းပပ ၊ မျိုးမမနူင့် ဒေါ်ဒေါ်လှ တို့ သုံးယောက် ယှဉ်သွားလိုက်ရင်၊ ယောက်ကျား သနာတွေ ဘယ်သူ့ ရွေးရမည် မသိ ဦးနှောက်စား သွားနိူင်သည်။ သူ့ဟာနူင့်သူ သရည်ကျစရာ ကြီးတွေကိုး၊ ကိုတင်ထွတ်မှာ မောင်းရင်းမောင်းရင်း သူပဲ စိတ်ထင်တာလား သူ့ကျောပြင်မှာ ယောက်ခမကြီး ၏ နိူ့သီးခေါင်း နူစ် လုံးက ထိုးထိုးထောင်ထောင် နူင့် သူ့ကျောပြင် ကိုကုတ်ခြစ်နေသလို ခံစားနေရသည်။ ကိုတင်ထွတ် မှာ မိန်းမ နူင့် ခွဲနေရသည်မှာလည်း နူစ်ပတ်လောက် ရှိပြီ မို့ လူကလည်း ဆာနေချိန်ဆိုတော့ သူ့ကောင်ကြီးက ဘောင်းဘီအထဲ မှာ မာတောင် တင်းထ နေလိုက်တာ သူ့ ကောင်ကြီး ခေါင်းပင် နာလာရလေသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ မှာလည်း လမ်းက ကြမ်း၍ ကိုတင်ထွတ်ကို ဖက်ထားရတော့ ဆိုင်ကယ်ကလည်း မြင့်ချည်နှိမ့်ချည်၊မြောက်လိုက် ပြန်ကျသွားလိုက် နူင့် ဆိုတော့ သူမ နိူ့ကြီးတွေကို ကိုတင်ထွတ်ကျောပြင်က ဖိနှိပ် ဆုပ်နှယ်သလို ခံစားရပြီး နိူ့သီးခေါင်းတွေက ထောင်ထလာရတော့သည်၊ နဂိုလ်ထဲကမှ အထိမခံနိူင် လောက်အောင် ခံစားမှုပြင်းသော သူ့နိူ့သီးခေါင်းတွေက ထောင်ထလာပြီး ကိုတင်ထွတ် ကျောပြင်ကို ပွတ်သတ်မိနေတော့ ဒေါ်ဒေါ်လှမှာ ကာမစိတ်တွေ နိူး ကြွလာပြီး သူ့ အဖုတ်မှ အရည်ကြည်တွေပင် စီးကျလာခဲ့ရလေတော့သည်။ ဒေါ်ဒေါ်လှ မှာ ဗမာ အမျိုးသမီး များထဲတွင် ခေသူ မဟုတ်ဟု ဆိုရမည်၊ သူက ငယ်ငယ်လေးထဲက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် ကို စိတ်ဝင်စားမှုမှာ တော်ရုံ မိန်းခလေး များထက် ပိုမည်ထင်သည်၊ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယောက်ကျား လေး တွေ သတိထားမိ အောင် ပြင်ဆင်သည်၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှအောင် အပင်ပန်းခံကာ လေ့ကျင့်ခန်းကို ဇွဲကောင်းကောင်းနူင့် လုပ်သည်၊ အပျိုရည် က လည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကထဲက ပျက်ခဲ့ရသည်၊ သူကိုယ်တိုင်က ပါလို့ ဖြစ်သွားရခြင်းပါ၊ နောက်ပြီး ကိုယ့် အလှ ကိုယ့်ဘော်ဒီနဲ့ လည်း ပေါ်ပျူလာ ဖြစ် ချင်သည်၊ ဒါကြောင့်လည်း မယ်ရွေးပွဲ တွေ ဘာတွေ မှာ ဝင်ပါ သည့် အဆင့်ရောက်သည်၊ သူ့ နယ် က မယ်ဘွဲ့ ရအောင်လည်း အကဲဖြတ်ထဲ မှာ သြဇာညှော င်းသည့် မြို့ မျက်နှာဖုံး လူကြီး
တယောက်ကို နည်းနည်း ပါးပါး ကျွေးခဲ့ ရသည်၊ ဒါပေမဲ့ လှလှ တို့ က ပါးသည်၊ သူများ အသုံးချတာ မခံ၊ ကိုယ့် တက်လမ်း အတွက် သာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံး သည်၊ ဒါကြောင့်လည်းဦးဘတုတ်ကို အမိဖမ်းခဲ့တာ ဖြစ်သည်၊ ဦးဘတုတ်တို့ က မျိုးရိုးနဲ့ ချမ်းသာခဲ့ပြီးတော့၊ ဦးဘတုတ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြိုးစား ပြီး ငယ်ငယ်ထည်းက မိဘ စီးပွားရေး ကို ဝင်လုပ် နေပြီဖြစ်သည်၊ လှလှ အဲဒီ အချိန်က ရီးစား နူင့် ဘတုတ် က သူငယ်ချင်း ဖြစ်သည်၊ သူ့ရီးစား က လူဘော် ကျော့ ဝိတ်ကလေးဘာလေး ကစားကာ ရှိုးနဲ့ မိုးနဲ့ အီးယောင်ဝါး ငပျင်းဖြစ်သည်၊ လှလှ သူ့ဘဲ ကိုခေါက် ၍ ကိုဘတုတ်နောက် ကောက်ကောက်ပါ အောင် လိုက်သွားလိုက်သည်၊ ကိုဘတုတ် က ချစ်ရေးချစ်ရာ မှာလည်း ခေသူ မဟုတ်တော့၊ သူတို့ နူစ်ယောက် အတွဲညီကြသည်၊ လှလှ ကလည်း အခြေချဖို့ တန်ပြီ ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပြီး ခလေး ယူလိုက်သည်၊ အခုတော့ သမီး နူစ်ယောက်နူင့် သူဌေးကတော်၊ ဘဝ၊ ဦးဘတုတ်ကလည်းအနူစ်၃၀ ကျော် အတူနေလာခဲ့သူ ဆိုတော့ တအိပ်ယာထဲ တောင် မအိပ် တော့၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ ကလည်း သူ့လို ကတော်ချင်းချင်း ဖဲရိုက်တာ တို့ ၊ အလှုတို့၊ ပါတီတို့၊ ကို အပျင်းပြေသွားရင်းငယ်စရိုက် ပြန်ဝင်လာသည်၊ တခါတလေ သူတို့ အချင်းချင်း လည်း ဘယ်သူက ဘယ်လို အငယ်လေး ထားတယ် ဆိုတာက အစ သရည် ကျ စရာ အညီ နံ့သင်းသင်းလေး တွေ ပြောဆိုအတင်းချရင်း စိတ်တက်ကြွတတ်သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှက သူကိုယ်တိုင်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ကထဲ က တခါမှ မဖေါက်ပြန် ခဲ့ဘူးသေးသော်လည်း၊ ထို အညီအဟောက် သတင်းလေး အ တင်းလေး တွေကြား ပြီး ရင် စိတ်ထထ လာတတ်သည်၊ ငယ်စဉ် ရွှေရောင် တောက်ခဲ့တဲ့၊ ကဲခဲ့တဲ့ အချိန် တွေကို ပြန်တမ်းတ လာမိတယ်၊ အခုဆို ဦးဘတုတ်ကလည်း ထိတောင် မထိတော့၊ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဦးဘတုတ်ကို ပျင်း နေပြီ မို့ တခါတရံ ကိုယ့်လက်နူင့်သာ ကိုယ်အာသာဖြေမိလေသည်၊ တခါတလေ ကိုယ့်ဘာသာ မလုံ ရှက်မိလျှင် ဘုန်းကြီးကျောင်းလေး ဘာလေး သွား ၊ အလှုဒါနလေး ပြု စသဖြင့် လုပ်မိသေးသည်။
အခုတော့ ကိုယ့်သားမက် ဆိုင်ကယ် နောက်မှာလိုက်စီးရင်း အဖုတ် က အရည်တောက်တောက်ကျ နေရသည်၊ ခုတလော သူ့သွေးသားတွေ ကို က သောင်း ကျမ်းလွန်း နေတာပါ၊ ဒီမြို့ လေးမှာ ပေါလှတဲ့ လပ်လပ် ဆတ်ဆတ် ပင်လယ်စာတွေကြောင့် များလား၊ ဒေါ်လှလှ အတွေး မဆုံး ခင်မှာပင် ကိုတင်ထွတ် ဆိုင် ကယ် က အရှိန် နှေးပြီး အိမ် တလုံးရှေ့မှာ ရပ်လိုက်သည်။ …မေမေ ခန ဆင်းလိုက်ရအောင် ဒီအိမ်ပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ အဝယ်တော် ရဲ့ အိမ် က… ကိုတင် ထွတ်က သူတို့ အတွက် ပစ္စည်းကောက်ပေးနေတဲ့ အဝယ်တော် အိမ်ရှေ့ မှာ ဒေါ်ဒေါ်လှကို ခနဆင်းစေပြီး သူက ဆိုင်ကယ်ကို အမိုးအောက် တနေရာကို တွန်းရွှေ့လိုက်တယ်၊ သူ့ဆိုင်ကယ် ကိုတွန်းနေ ရင်းနဲ့ မှ အမှတ်မထင် သူ့ယောက်က္ခမကြီး ထမိန်ဖြန့်လှည့်ဝတ်တာ တွေ့လိုက်ရတဲ့ အပြင် ထမိန် နောက်ဖက် မျာပါ အစိုကွက် တကွက် တွေ့လိုက်ရသည်၊ ဟင် ယောက်က္ခမ ကြီးရော ငါ့လိုပဲ ဖီးတက်နေ တာလား ဟု ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားလေသည်။ ကိုတင်ထွတ် သူတို့ အဝယ်တော်နူင့် စကားပြောဆို ငွေကြေးကိစ္စ များ ရှင်းလင်းပြီးတော့ သူတို့ ရုံးစိုက်ရာမြို့ သို့ ပြန်ဖို ပြင်ကြ သည်၊ ကိုတင်ထွတ် မှာ သူ့ယောက်က္ခမ တွေ မြို့မှာလည်း ခန နားခဲ့ရ၊ နောက် ဒေါ်ဒေါ်လှ ပါသဖြင့်လည်း ဆိုင်ကယ်ကို တအားမမောင်းနိူင်၊ အခု ငွေကြေးကိစ္စ ရှင်းရာမှာလည်း ထင်တာထက်ကြာ သွား တော့ နေလေးစောင်းနေပြီ၊ သူအမြန်မောင်း မှ ညကြီးမိုးချူပ် သူတို့ ရုံးရှိသည့် မြို့ ကိုရောက်မည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှကတော့ ပြောပါသည်၊ အရမ်းမမောင်းပါနဲ့ တကယ်လို့ မမှီရင် လမ်းက မြို့သေးသေးလေးတခု မှာ ခနဝင်အိပ်ပြီး မှ မနက်ဆက်သွားမည် ပေါ့၊ ခရီးတွေက သိပ်မဝေးသော်လည်း ထိုလမ်းများမျာ နည်း နည်းမှောင်တာနဲ့ ခရီးသွားလို့ မကောင်းတော့ပါ၊ ကိုတင်ထွတ်က သိ သည် အဲဒီမြို့လေး မှာ က သူ့ယောက်က္ခမတွေ တည်းလေ့ရှိတဲ့ ဟော်တယ် တည်းခိုခန်း အဆင့်မျိုး မရှိ၊ တည်းခိုခန်းနူံချာချာ တခုသာရှိသည်၊ အဲဒါတောင် အစိုးရ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက် အဓိက မို့ အမြဲတမ်းလူပြည့်နေလေ့ရှိသည်၊ ထင်သည့် အတိုင်းပင်၊
သူတို့ ထိုတည်းခိုခန်း ရောက်တော့ အခန်းတွေ အကုန်ပြည့်နေပြီ၊ တခန်းက ဘုတ်ကင်လုပ်ထားပြီး မလာကြသေး သို့သော်လည်း အခု အချိန်မှ မလာရင် သူတို့ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ် အရမနက်ဖြန်နေ့လည်မှ ရောက်ကြမည်၊ သို့သော် သူတို့ က ပိုက်ဆံရပြီးသားမို့ သူများကို မငှားချင်တော့၊ ကိုတင်ထွတ် ဆီ မှ ဘောက်ဆူး အများကြီးကြောင့်သာ ထိုအခန်းကို သူတို့ ရလိုက်သည်၊ ထိုအခန်းက လည်း ကုတင်က တလုံးထဲ ဒါပေမဲ့ နူစ်ယောက်အိပ်ကုတင်၊ ကိုတင် ထွတ်ကတော့ ကြမ်းပေါ်မှာ အိပ်မည်ဟု ဆိုသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှက အို ကြမ်းက ဒီလောက်ညစ်ပတ်နေတာ၊ ကုတင်ပေါ်မှာပဲ အိပ်ပါဟု ဟန်မပျက် ၊ ဘာမှ မ ထူးခြားသလိုပင်ပြောသည်၊ သူ့ရင်ထဲ မှာတော့ တဒုတ်ဒုတ် ဖြစ်နေပြီ၊ ကိုတင်ထွတ်လည်း ဘာထူးလည်း ရင်ထဲ မှာ တဒုန်းဒုန်း ၊ ယောက္ခမ မြစ်စို့ကြီးနဲ့ တ ကုတင်ထဲ အိပ်ရ မယ်ဆိုတာ၊ အသက်ရူ ပုံမုန်ဖြစ်အောင် မနည်းထိန်းနေရသည်၊ နောက် ထိုမြို့လေး က တဆိုင်ထည်းသော တရုပ်စားသောက်ဆိုင်လေး မှာ ညစာစားကြရင်း၊ ကိုတင်ထွတ်ကမန္တလေးရမ် တစိတ်လောက် ချလိုက်သည်၊ ရမ်ကို နိ သောက်လိုက်သဖြင့် သွေးသားတွေ ဆူလာပြီး နည်းနည်း ပုံမှန်လို ဖြစ်သွားသည်၊ တကုတင်ထဲ အိပ်ရတာ ဘာမှ မထူးပါဘူး ဆိုသည့် ပုံဖြင့်ဒေါ်ဒေါ်လှ ကုတင်ပေါ် တက်လှဲတော့ သူက စာဖတ်နေလိုက်သည်၊ ည ၁၀နာရီကျ တော့ တည်းခိုခန်းက မီးစက် ပိတ်သွားသည်၊ တလောက လုံး မှောင်ပိန်း သွားသလိုထင်ရသည်၊ ကိုတင်ထွတ်က ဖယောင်းတိုင် မီးလေးတတိုင် ထထွန်း လိုက်သည်၊ ဖယောင်းတိုင် မီးယောင် ဖြင့် မြင်နေရသော ကုတင်ပေါ် ဇာခြင်ထောင် အတွင်း၊ သူ့ကို ကျောပေးအိပ်နေသော ယောက္ခမ ကြီး၏ ဂစ်တာ ရှိတ် ဘော်ဒီကို လှမ်းကြည့်မိပြီး သူ့ညီတော်မောင်က တင်းကနဲ ဖြစ်လာသည်၊ သူ့မိန်းမ ဝင်းပပ နဲ့ တပုံစံထဲ မို့ လည်း သူ့ အကြည့်က စားနေကြ အစာကို ကြည့် သည့် ကျားတကောင် အကြည့်လို စူးရဲနေသည်။
ဒေါ်ဒေါ်လှ တယောက် ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ရင်း အဖုတ်တွင်းမှာတော့ အရည် တွေ စိမ့်စိမ့်ကျနေသည်၊ သူငယ်စဉ် အပျို ဘ၀ တုန်းက အတွေ့ အကြုံတွေ မှာ အများကြီး ဖြစ်ပြီး၊ ကိုဘတုတ်နူင့်အိမ်ထောင်ကျပြီးကာ မှ သာ တချောင်းကိုင် အဖြစ် နေခဲ့ သည်မှာ နူစ်ပေါင်း အတော်ကြာခဲ့ ပြီဖြစ်ကြောင်း တအံ့တ သြ တွေး နေမိသည်၊ သူ့သူငယ်ချင်း ဟော့ရှော့ ကောင်မတွေ တခါငှား အနှိပ်ခံ သော ကောင်လေး နူင့် အနှိပ်ခံခဲ့စဉ် တုန်းကလည်း တစိမ်းယောက်ကျား တ ယောက် အထိ အတွေ့ ကို မခံရ တာကြာတော့ အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် စီးခဲ့ရသည်၊ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်သိက္ခာနူင့် ဂုဏ်သရည်၊တော်ကြာ ဘာမှန်းမသိရသည့် တ စိမ်း ကောင်ပေါက်စလေးကြောင့် စားရတာနူင့် မတန် မရာ ကိုယ်ကျိုးနည်း မှာ စိုး၍ အတင်း စိတ်ထိန်း ခဲ့သည်၊ အခုကတော့ ကိုယ့် သားမက် အရင်းခေါက် ခေါက်၊ ကိုယ့်မိသားစု ထဲက ဆိုတော့ အပြင်လည်း မပေါက်ကြားနိူင်၊ သမီးသိသွားမှာ စိုး၍ ဒီကောင်လည်း အပြင်မှာ အာရဲမည် မဟုတ်၊ နူစ်ယောက်ထဲ ကု တင်တလုံးထဲမှာ အိပ်ရမှာ ဆိုတော့ အခြေ အနေကတော့ တအားတွန်းပို့နေပြီ၊ တခုပဲ ရှိတယ်၊ ဒီကောင်က ငါ့ကို အဖွားကြီး ဆိုပြီး စိတ်ဝင်စားပါ့မလား၊ ငါက စလိုက်ရင်ကော၊ ယောက်ကျားဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ နင်သိတာပဲ မိလှ ရယ် လို့ ကိုယ့် ကိုကိုယ်ပြောရင်း အတွေးတွေ ချဲ့နေမိတယ်၊ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ ကုတင်သိမ့်ကနဲ တုန်သွားပြီး တင်ထွတ်ကုတင်ပေါ်တက်လာတာ သိလိုက် တယ်။ အရက် အရှိန် လေးနူင့် အမှောင်အားကိုး ပြီး ကိုတင်ထွတ်တယောက် ဘယ်လိုစရမည် မှန်းမသိ တော့ အိပ်ပျော် နေသလား မသေချာသာ ယောက်က္ခမ ကြီး အနောက်က အသာကပ်၊ သူ့ထောင်မတ် နေသော လိင်ချောင်း ကြီး ၏ ထိပ်ဖြင့်၊ ဒေါ်လှ ဖင်ကြားလှမ်း ထောက်လိုက်သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ မှာ ခနတော့ ငြိမ်နေပြီးနောက် ကိုယ် ကိုပက်လက်လှန် လိုက်ကာ ကိုတင်ထွတ် လိင် ချောင်းကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ပင် အုပ်ကိုင်လိုက် သည်၊ ရုတ်တရက် လန့် သွားပြီး ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေသော ကိုတင်ထွတ်မှာ သူ့ယောက္ခမကြီး က သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို ပုဆိုးပေါ်မှ ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သတ်ပေးနေကြောင်း သိလိုက်ရတော့ သူ့လက်တွေက အလိုလို ယောက္ခမ ကြီး ရွှေရင်အစုံပေါ် ရောက်သွားတော့သည်၊
….အင့်.အင်း….အူး… မှောင်ထဲ မှ ဗလုံးဗထွေး ငြီးသံ ငြူသံ တို့ဖြင့် အတွေ့ အကြုံရှိနေကြသော သူနူစ်ဦး၏ ရမက် ပြင်းပြင်းဖြင့် လှုပ်ရှားမှု သံစဉ်တွေ က ပေါ်ထွက် လာသလို၊ အမှောင်ထဲ တွင် တယောက်ကို တယောက် အဝတ်အစားတွေကို အလုအယက် ဆွဲချွတ်နေကြတော့သည်၊ ကြီးမားဖွင့်ထွားလှသော ဒေါ်ဒေါ်လှ နိူ့ကြီး နူစ်လုံးမှာ ကိုတင်ထွတ် လက်ဖဝါး နူစ်ခုအောက်တွင် နံပြားရိုက်ခါနီး ဂျုံနယ် သလို အနယ်ခံနေရပြီး ကိုတင်ထွတ် လိင်ချောင်းကြီး မှာ လည်း ဒေါ်ဒေါ်လှ လက်ထဲ မျောက်ငှက်ပျောသီး ရသလို ပွတ်သပ်ဆောင့်ဆွဲ အလုပ်ခံနေရလေသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှပေါင်ကြီး နူစ်လုံးကို ကားပေးပြီး ကိုတင် ထွတ် လိင်ချောင်းကြီး ကို ဆွဲယူလိုက်တော့ ကိုတင်ထွတ်က အလိုက်သင့် ပင် ဒေါ်ဒေါ်လှ ပေါင်ကြားထဲနေရာဝင်ယူလိုက်သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှက ကိုတင်ထွတ် လိင်ချောင်းထိပ်ဖူး ကို သူ့ အဖုတ် ၀ မှာ တေ့ ပေးလိုက်တာနဲ့ အောင့်နေရသည် ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ ကိုတင်ထွတ်က စိကနဲ ဆောင့်ထိုး ပစ်လိုက်၏၊ … အား..အိ..ဖြေးဖြေး လုပ်ပါကွာ မောင်တင်ထွတ်ကလည်း… …ဆောရီး မေမေ ..ကျနော် လောသွားတယ်…ကျနော်လည်း အဲလောက် …အင်း… …ဘာလဲ ကျပ်မယ်မထင်ဘူးလို့ ပြောမလို့လား..ဟင်း..ငါက သမီး နူစ်ယောက်လုံးကို ဗိုက်ခွဲ မွေးလာတာ၊ နောက် ကိုဘတုတ်နဲ့ လည်း မအိပ် ဖြစ်တာ နူစ်ပေါင်း ကြာ နေပြီ… …ဟုတ် ..ဟုတ်..မေမေ.. ..ဟဲ့..နင်က ငါ့ကို လုပ်နေပြီး မေမေ မေမေ နဲ့ မခေါ်နဲ့ အဲဒါ လူရှေ့ကြမှ ခေါ်… …ဟုတ်..ဟုတ်..ကဲ့ ..မမ.. ကိုတင် ထွတ် စိတ်ထဲ မတော့ ဒီမိန်းမကြီး အောက်က နေတာတောင် လေက မလျှော့ သေးဘူး အာဏာ သံ ကြီးပဲ ၊ ကြည့်နေ ၊ကောင်းကောင်းလိုးပြလိုက် အုန်း မယ်၊ နောက် တော့ မှ ကိုကိုတင် ကျမ ကို လုပ်ပေးပါအုန်း ဖြစ်နေစေရမယ်၊ ဟု ကြိမ်းဝါးရင်း အားကြိုးမာန်တက် ဆောင့်တော့သည်။
ဒေါ်ဒေါ်လှ မှာလည်း မစားရတာကြာလို့ တောင်းတမိသော အရာ ကို ပြည့်ပြည့် ၀၀ ခံစားနေရသဖြင့် အရသာ အထူး တွေ့နေရလေသည်၊ သူကိုယ်သူပင် မေ့ နေပြီ ထင်သော အတွေ့ အကြုံများကလည်း အလိုလို ပြန်ပေါ်လာ ခဲ့သဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာ အစိပ်အပိုင်းများက သူ့အလိုလို လှုပ်ရှားနေပေတော့သည်။ သူ့ ပေါင် လုံး နူစ်လုံးမှာ ကိုတင်ထွတ် ခါးကို ညျပ်လျှက် သူ့ခြေသလုံး များဖြင့် ကိုတင်ထွတ် ဖင်ကို ဖိ၊ သူ့ဖနောက်များဖြင့်ဆွဲဆွဲ သွင်းလေရာ ကိုတင်ထွတ် ဆောင့် သည့်အခါတိုင်း သူကအားကူပေးသလို ဖြစ်သဖြင့် ဆောင့်ချက်များမှာ ပြင်းရသလို၊ တိုင်ပင်ကလည်း ကိုက်နေပေတော့သည်၊ သူ့ နိူ့ကြီး နူစ်လုံးကို ကိုတင် ထွတ် ရင်ဘတ်မှာ ဖိကပ်ထားပြီး ကိုတင်ထွတ်ကြောပြင်ကြီး ကိုလည်း သူ့ လက်သည်းကလေး များဖြင့် ကုတ်ခြစ်ပေးလေသည်၊ သူ့ ဖင်ကြီး ကိုလည်း ငြိမ် ငြိမ် မခံ ပဲ စကောဝိုင်း လို လှည့်ပေးလေရာ၊ သူ့ အဖုတ် နံရံ အနှံ့ အပြားကို ကိုတင်ထွတ် လိင်ချောင်း ကြီး က ပွတ်တိုက်မိနေလေတော့သည်။ နူစ်ယောက် စလုံးမှာ အတွေ့ အကြုံရှိသူများဖြစ် ကြသဖြင့် ကာမအရသာကို ကောင်းကောင်း ခံစားကြရသော်လည်း နူစ်ယောက်စလုံးမှာ ပြတ်လပ်နေကြတာ လည်း ကြာပြီမို့ သိပ်အကြာကြီး မခံပေ၊ နူစ်ယောက်စလုံး တပြိုင်နက်ထဲ ပထမဆုံး ကာမ အရသာ အထွတ်အထိပ် ရောက်သွားကြပြီး တယောက်ကို တယောက် တင်းတင်း ကျပ်ကျပ် ဖက်ထားရင်း ကောင်းကောင်းကြီး မှိန်းကာ၊ အရသာခံနေကြလေတော့သည်။ ကိုတင်ထွတ် အိပ်ယာက နိူးလာတော့ အာရုံဦး အလင်းရောင်က အခန်းထဲ ထိုးဝင်နေပြီ၊ သူ့ ဘေးမှာတော့ သူ့ ကို ကျောပေးပြီး အိပ်နေသော ယောက္ခမ ကြီး ဒေါ်လှလှ ကို တွေ့လိုက်ရသည်၊ သေးအရမ်း ပေါက်ချင် လှသဖြင့် ကမန်းကတန်း ထပြီး အိမ်သာသို့ ပြေးရလေသည်၊ သေးပေါက်ပြီး သွား၍ ဘေးနားက ရေချိုးသည့်နေရာ သံမန်တလင်း မှာ ထိုင်ပြီး ရေခွက်နူင့် သူ့ လိင်တန်ကြီး ကို သေသေခြာခြာ ဆေးကြောလိုက်သည်၊ ထိုအခိုက် ရုတ်တရက် အခန်းတံခါး ပွင့်သွားတော့ လန့်သွားသော်လည်း ဒေါ်လှလှ ဖြစ်နေ၍ ပြုံးပြီး နူတ်ဆက်လိုက်သည်။
…ဟော မေမေ နိူးလာပလား… ..အင်း ရူးပေါက်ချင်လို့ …အိပ်တာတော့ မဝသေးဘူး.. ကိုတင်ထွတ်က လှမ်းနူတ်ဆက်လိုက်သော်လည်း လက်ကမူ သူ့ လိင်တန်ကြီး ကို ရေဆေး မပျက်၊ သူ့လိင်တန်ကြီး ကလည်း အိပ်ရေးဝထားတော့ အားတွေ ပြန်ပြည့်ကာ မာမာဖောင်းဖောင်းကြီး ဖြစ်နေ၏၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ မျက်လုံးတွေက သူ့လိင်တန်ကြီးပေါ် မှာ ရောက်နေတာတွေ့တော့ သူ့ ကောင်ကြီး က ပိုကြီး ဖောင်းတင်းမာ လာ၏၊ ကိုတင်ထွတ် က အခန်းထဲ က ထွက် သွားမှ ဒေါ်လှလှတယောက် အိမ်သာပေါ်ထိုင် ကာသေး တရွှီရွှီ ပေါက်တော့သည်၊ ကိုတင်ထွတ်တယောက် အိပ်ယာဘေး မှ ရေဘူး ကို ယူသောက်ပြီး ပြတင်းပေါက် ကို အသာလှပ် ၍ နံနက်ခင်း လေပြေအေးလေးကို ရူရိုက်နေ ၏၊ ထိုစဉ် ရေချိုးခန်းထဲ မှ ရေ တဗွမ်းဗွမ်း လောင်းနေသံကြား တော့ ယ္ခောမ ကြီး ရေချိုးနေပြီ ဟု သိလိုက်ရသည်။ ညတုန်းက ယောက္ခမ ကြီး ကို လိုးလိုက်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ ဟု ပြန်တွေး မိတော့ သူ့ လိင်တန်ကြီး မှာ ပြန် ထောင်ထလာ၏၊ အင်း ယောက္ခမ ကြီး ရေချိုးနေတယ် ဆိုတော့ ငါလည်း သွားတိုက်မှ ရတော့မယ် ဟုတွေးရင်း ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်လာခဲ့မိသည်၊ ဟိုက် ယောက္ခမကြီး က ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ချိုးနေပါလား၊ ကိုတင်ထွတ်က မထူးဆန်းသလို အမူအယာဖြင့် သူ့သွားပွတ်တန်ထုတ် သွားတိုက်လျှက် ယောက္ခမ ကြီး ရေချိုးနေတာ ကို ပေါ်တင်ကြည့်နေလိုက်၏၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ ကလည်း ခတ်တည်တည် ပင် သူ့ ဘေးတွင် သွားတိုက်နေသော ကိုတင်ထွတ်ကို မေးဆပ် ပြီး နူတ် ဆက်လိုက်ရင်း၊ …ချွေးတွေနဲ့ အိုက်စပ်စပ်မို့ ရေတခါထည်း ချိုးလိုက်တယ်.ကွာ..မင်းရော မချိုးဘူးလား.. …အင်း..ချိုးမယ်လေ.. ကိုတင်ထွတ် တ ယောက် ဖိုးကျိုင်းတုတ် ဖြစ်သွား၏၊ ကမန်းကတန်း ပါးလုပ်ကျင်း၊ အင်းကျီလုံခြည်ချွတ်ပြီး ဒေါ်ဒေါ်လှ ဘေး ဝင်ကာ ရေခပ် ချိုးလိုက်၏၊ သူ့ဘေးနားက ဆပ်ပြာတိုက်နေသော ဒေါ်ဒေါ်လှ ကို လှမ်းကြည့်ပြီး၊
…မေမေ ကျနော် ကျော ကိုတိုက်ပေးမယ်လေ.. ဒေါ်ဒေါ်လှက ခေါင်းငြိမ့်ပြတာနဲ့ ကိုတင်ထွတ် ဆပ်ပြာတုန်း ကောက်ယူ လက်ဖြင့် ပွတ်ကာ ဒေါ်ဒေါ်လှ ကျောပြင် ကို ဆပ်ပြာမြုပ်ထ အောင် ပွတ်ပေးနေတော့သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ ကျောပြင်မှ တဆင့် ခါး နောက်တော့ တင်လုံး ကြီးတွေ၊ ကို ပွတ်သပ်ပေးနေရင်း၊ အားမလိုအားမရ ဖျစ်ညစ်လိုက်သေးသည်၊ နောက်တော့ ပေါင်တန်ခြေသလုံး၊များ၊ ယောက္ခမ ကြီး နဲ့ နူစ်ယောက်ထည်း ကိုယ်လုံးတီး ရေချိုးနေရသည့် အပြင် တကိုယ်လုံး ကိုလည်း ဆပ်ပြာတိုက်ပွတ်ပေးနေရတော့ ကိုတင်ထွတ် လိင်ချောင်း ကြီး မှာ၊ သံချောင်းကြီး လိုမာတောင် နေလေပြီ၊ ကိုတင်ထွတ်က သူ့လက်နူစ်ဖက်ဖြင့် ဒေါ်ဒေါ်လှ ပေါင်အရှေ့ပိုင်းကို သိုင်းဖက်လျှက်ပွတ်သတ်ပေးရာ ဘာမှ မပြောသဖြင့် ဝမ်းပြင်မှ တဆင့် ဒေါ်ဒေါ်လှ နိူ့ကြီး များကိုပါ ဆပ်ပြာမြုပ် တွေ ဖြင့် ပွတ်သပ် ဆုပ်နှယ် ပေးနေတော့သည်၊ ထိုကဲ့သို့ အနေအထားကြောင့် ထောင်မတ်နေသည့် ကိုတင်ထွတ် လိင်တန်ကြီး မှာ ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင်လုံးကြီး နူစ်ခုကြားမှာ လွှထိုးသကဲ့သို့ ပွတ်တိုက် မိနေလေသည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှမှာ လည်း ကိုတင်ထွတ် ၏ အပွတ်အသတ် အဆုပ် အနယ် ကြောင့် ကာမ ဆိပ် တက်လာပြီ ဖြစ်ရာ က ၊ ကိုတင်ထွတ် ဒုတ်ကြီးက သူ့ဖင်ကြားတိုးဝင် လျှောတိုက်နေတော့ ဒူးများပင် ညွတ်ခွေချင် လာသဖြင့် သူ့ကျောကို ကိုတင် ထွတ် ရင်ခွင်ထဲ မှေး လျှက် မှီထားရင်း ကိုတင်ထွတ် ကိုယ်လုံးကို လက်နောက်ပြန် ကိုင်လျှက် ခိုထားမိလေသည်၊ ကိုတင်ထွတ် မှာ အရမ်းအရမ်း ကို စိတ်ထ လာပြီ ဖြစ်သဖြင့်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ လက်နူစ်ဘက်ကို ကိုင်ကာ ရေကန်ဘောင် ပေါ် ထောက်ကိုင် စေ လိုက်ပြီး ဒေါ်ဒေါ်လှခါးကလေး ကို ဆွဲလျှက် ဖင်ကို ကုန်း ခိုင်းလိုက်သည်၊ အုတ်ကန် ဘောင်ကို လက်နူစ်ဘက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လျှက် ခါးကို နိမ့်ကာ ဖင်ကို ကော့လိုက်သဖြင့် ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင်ကြီး မှာ ကားပြီး စွင့် တက်လာ၏၊ ကိုတင်ထွတ်က ဒေါ်ဒေါ်လှ ပေါင်နူစ်လုံးကို ချဲရပ်စေပြီး ပေါင်ခွဆုံကြားမှာ ကွဲအာ နေသော အဖုတ်ဝ တွင် သူ့ဒုတ်ကြီး ကို တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်းလိုက်လေသည်။
..အား….ရူး…. ဒေါ်ဒေါ်လှ နူတ်ဖျားမှ ညည်းတွား သံလေး ထွက်လာ၏၊ မာကြောကြော ပူနွေးနွေး အချောင်းကြီးက သူ့ အဖုတ်အတွင်းသားနုနုလေး ကို တိုး တိုက် ဝင်လာလို့ အာရုံကြောတွေက စိမ့်သွားအောင် ကောင်းသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ အကြံသမား ကိုတင်ထွတ်က ဒေါ်ဒေါ်လှ အဖုတ်ထဲ သူ့ လိင်တန် ကြီး ကို ဖြေးဖြေးချင်း အသွင်းထုတ် လုပ်နေရင်းက ဆပ်ပြာတုန်း အပဲ့လေးကို ဒေါ်ဒေါ်လှ ခရေပွင့်လေးထဲ သူ့လက်မ ဖြင့် ထိုးသွင်းပေးနေ၏၊ သူ့ လက်မ တဆစ် အေးဆေး ဝင်သွားသော်လည်း ဒေါ်ဒေါ်လှ ထံမှ ငြင်းဆန်သော အသံ မကြားရသဖြင့် လက်ညိုးနူင့် လက်ခလယ် နူစ်ချောင်း ဝင်အောင် ဖြည်းဖြည်း ချင်း ကစား ပေးနေလေသည်၊ သူ့ လိင်ချောင်းကြီး ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသာ အဝင်အထွက်လုပ်ပေးနေသဖြင့် အရှိန်တက်နေသော ဒေါ်ဒေါ်လှ တယောက် ဖင် ကြီး ကို ကော့ကာကော့ကာ လိုက်လိုက် လာပေရာ၊ ကိုတင်ထွတ် ၏ လက်နူစ်ချောင်းက လည်း ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင်ပေါက် ကို ရှောရှောရူရူ ဝင်နိူင်အောင် လုပ် ပေးနေသလို ဖြစ်နေတော့သည်။ ထိုအခါ ကိုတင်ထွတ်က သူ့လိင်တန်ကြီး ကို ဒေါ်ဒေါ်လှ အဖုတ်တွင်းမှ ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ဒေါ်ဒေါ်လှ ခမျာ ဟာကနဲ ဖြစ်သွား ရလေသည်၊ သို့သော်လည်း ထို အတန်ထိပ်ခေါင်းက မိမိဖင်ပေါက် ၀ ကို တိုးလာနေကြောင်း သိရသဖြင့် အတွေ့ အကြုံ ရှိသူ ပီပီ ဖင်ဝ ကြွတ်သား ကို အသာ လျှော့ပေးလိုက်လေသည်။ သို့သော်လည်း စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့် ကိုတင်ထွတ် ကို လှမ်းသတိပေးလိုက်၏၊ …ဖြည်းဖြည်း ကွဲ့ မောင်တင်ထွတ်..မင်းဟာကြီး က တုတ်တယ်၊ အရမ်း ဆောင့်မထိုးနဲ့ ချော့သွင်း၊ တော်ကြာ ငါ့ဖင်ပြဲသွားအုန်းမယ်..
..ဟုတ်..ဟုတ်..မေ…အော်..မ..မ…. ကိုတင်ထွတ် က ယောက္ခမကြီး အတွေ့အကြုံ တော်တော် ရှိတာပဲ ဟု တွေးလိုက်မိသည်၊ သူ့ မိန်းမ ဝင်းပပ ကို ဖင်ချ ရဖို့ သူ မနည်း သိမ်းသွင်းခဲ့ရသည်မဟုတ်လား၊ နူစ်ယောက် စလုံး အတွေ့ အကြုံရှိတော့ လည်း သိပ်မကြာခင် ပင် ကိုတင်ထွတ် လိင်တန်ကြီး ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင် ပေါက်ထဲ အဆုံးထိ ဝင်ရောက်သွားပါတော့သည်၊ ကိုတင်ထွတ် မှာ ထိုအခါမှ အပီ အပြင် နေရာယူ ဒူးကွေးညွတ် ကာ ဒေါ်ဒေါ်လှ ခါးလေးကို ကိုင်ကာ ဆွဲဆွဲ ဆောင့်လေတော့သည်၊ ဒေါ်ဒေါ်လှ ၏ ရေစို ပြီး ဝင်းပြောင်နေသော တင်သားစိုင်ကြီး များက ကိုတင်ထွတ် ပေါင်ခြံ ဖြင့် ဖတ်ကနဲ ရိုက်ဖိ မိတိုင်း တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ကျောက်ကျောတုန်း ကြီး များလို ဘေးတဘက် တချက် စီသို့ လိမ့်လိမ့် သွားပုံကလည်း ကြည့်ကောင်းလှပေသည်၊ ဆပ်ပြာရည် များ ရှိနေ သော်လည်း တင်းကျပ် လှသည့် ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင်ပေါက် ၀ ၏ ဖျစ်ညှစ်မှု အားကြောင့် ကိုတင်ထွတ် မှာ ကြာရှည်တော့ မဆွဲ နိူင်ပါ၊ ခန အတွင်းမှာပင် အားပြင်း လှသော သုတ်ရည် များက သူ့ လိင်ချောင်း ထိပ်မှ ဖျောကနဲ ဖျောကနဲ ဒေါ်ဒေါ်လှ ဖင်ခေါင်းထဲ မှာ ပန်းထွက်သွားရရှာတော့သည်။ ကုတင် ပေါ် ဖင်ထောင် ကုန်းပေး နေသော ယောက္ခမကြီး ကို အားရ ပါးရ အနောက်က နေ ဆောင့်လိုး နေသော ကိုတင်ထွတ် တယောက် သူ့ အခန်းထောင့် စားပွဲ ပေါ်က တဂွမ်ဂွမ် မြည်လာသော ဖုန်းသံကြောင့် နာရီ ကို လှမ်း ကြည့် လိုက်သည်၊ အင်း စနေနေ့ ဒီ အချိန် ဆို ရင် သူ့ မိန်းမ ဝင်းပပ ပဲ ခေါ်တာ ဖြစ်ရမယ် ဟု သိလိုက်သည်။ ယောက်က္ခမ ကြီး သူ့ လက်ကို အတင်းဆွဲ နေသည့် ကြားမှ ရုန်းထွက်ပြီး သူ့လိင်တန်ကြီး ကိုလည်း ဒေါ်လှလှ အဖုတ်တွင်း မှ ဖေါက်ကနဲ မြည်အောင် ဆွဲ ထုတ်လိုက်ပြီး တယ်လီဖုန်း ရှိရာသို့ ဒုတ်တန်းလန်း နူင့် ပြေးသွားလေသည်၊ တယ်လီဖုန်းဘေးက ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ဟောဟဲ လိုက်ပြီး သူ့ အသက်ရူသံတွေ က မြန်နေသည်။
…ဟေး အချစ်လား ဘယ်လိုလဲ အစဉ်ပြေရဲ့လား… …ပြေပါတယ် ကို ရော ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ အသံက မောနေတာလား… ကုတင် ပေါ် မှာ တန်းလန်း ကြီး ကျန်ခဲ့သော ဒေါ်ဒေါ်လှ ကိုတင်ထွတ် ထိုင်နေရာ သို့ ကိုယ်လုံးတီး ဖြင့်ပင် လျှောက်လာပြီး ကိုတင်ထွတ် ကုလားထိုင်ဘေးမှာ ဒူးထောက်ရက်ဖြင့် ကို တင်ထွတ် လိန်တန်ကြီး ကို ငုံစုပ်လိုက်သည်၊ ကိုတင်ထွတ်က ယောက္ခမ ကြီး လည်ဂုတ် ကို သူ့လက်ဖဝါး တဘက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးရင်းက ဖုန်းဆက်ပြော နေလိုက်သည်။…အေး အခု ကိုယ်က အိပ်ဆယ်ဆိုက် လုပ်နေတုန်း တန်းလန်း ကြီး ဝင်း က ခေါ်လို့လေ.. မမျိုး တို့ ပြန်ရောက်ပြီလား… ..မမျိုး တို့ မရောက် သေးဘူး မန်းဒေး ရောက်မယ် ထင်တယ်…ကို့ ဆီမှာ မေမေ ရောက်နေတယ် ဆို.. …ဟုတ်တယ် မနက်ဖြန် ဖေဖေ့ ဆီ ပြန်ပို့ပေးရမယ်… …အခု မေမေ က ဘာလုပ်နေလည်း … …အော် ဗိုက်ဆာလို့တဲ့ ငှက်ပျောသီး စားနေတယ်… ကိုတင်ထွတ် က သူ့ ကို ပုလွေပေးနေသော ယောက္ခမ ကြီး ကို ငုံ့ ကြည့်ပြီး ပြုံး လိုက်သည်။ ….ခိခိ မေမေ ကတော့ လုပ်ပြီ၊ မေမေ့ ကို ဂရုစိုက်လိုက်နော် ကို၊… …အင်းပါ ကို သေခြာ ဂရုစိုက်ထားပါတယ်၊ လိုလေသေးမရှိလေ ၊ သူဘာ ဖြစ်ချင်သလဲ… ယောက်မက္ခ ကြီးက ပုလွေမှုတ်နေရင်းက ကိုတင်ထွတ် ကို မျက်စောင်းတချက် မေ့ါထိုးလိုက်သည်။
အဲဒီနေ့ တနေ့လုံး အပြင် မထွက်ကြပဲ ကိုတင်ထွတ် နဲ့ ဒေါ်ဒေါ်လှ ၊ ကိုတင်ထွတ် အခန်းထဲ မှာ တနေကုန် လိုးကြသည်၊ ဗိုက်ဆာရင် အနားက ဒလိဗာရီလုပ် ပေးသော ထမင်းဆိုင်က လှမ်းမှာ ပြီး စားကြသည်၊ ကိုတင်ထွတ် တယောက် သူ့ မိန်းမ ဝင်းပပ သာ သူ့ ယောက္ခမ ကြီး လို အရှက်ကုန်ပြီး အပေးကောင်း လိုက် ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ တောင် တွေးမိသည်၊ ပုံစံ မျိုးစုံ ကို နူစ်ယောက်စလုံး ငတ်ငတ် နူင့် အသေတီးကြတော့သည်၊ အခေါ် အဝေါ်က တော့ နူ တ်ကျိုးနေတာလည်း ပါ၊ နောက် ဆိုလည်း သူများရှေ့ မှားခေါ်မိမှာစိုးလို့ မပြောင်းကြ ၊ မောင်တင်ထွတ် နူင့် မေမေ ပဲ ခေါ်ကြ ပြောကြသည်၊ တနေ့လုံး ဆော်ကြသဖြင့် ညကျတော့ မတတ်နိူင်ကြတော့ အိပ်မောကျ သွားကြသည်၊ မနက် အစောကြီး အိပ်ယာနိူးတော့ အားပြည့်နေ ကြပြီ မို့ နူစ်ယောက်သား တ ဖုံးဖုံး ဆော်ကြသည်မှာ ကိုတင်ထွတ် သူ့ ယောက္ခမ ကြီး ကို သူတို့ နေသည့် မြို့ ပြန်လိုက်ပို့ ခါနိး အထိ ဖြစ်လေသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ယောက်ခမ ၏ ပလှေ